လူသားအားလုံးအတွက်: August 2011
မြောက်ကိုရီးယား ဒုံးကျည် စမ်းသပ်မှု အရေးမကြီးသလို ထရမ့်ပြော
CITY FM9ချစ်ခြင်းရဲ့နေ့သစ်တိုင်း
မုန်း...မုန်း...မုန်းမေ့ဖို့ခက်တယ် - စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၊ မိုးမိုး
တီအားမို - ထွန်းအိန္ဒြာဗို၊ဖြူဖြူကျော်သိန်း
အချစ်တစ္ဆေ ရတနာမိုင်၊Feat အောင်ရဲလင်း
CITY FM 9
သြော် မိန်းမ ဖြိုးသီဟ+သွန်းရွှေလျှံ+အယ်နီရှိုင်း
အို ကမ္ဘာမြေ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်+ချမ်းချမ်း+ဂီတမိတ်
ဆုပေးပွဲ စီးတီးအက်ဖ်အမ် ၉
Posted by မိုးယံ at 4:05 AM 10 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အမေရိကန် အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် နှစ်တစ်ရာ အတွင်း မကြုံစဖူး ငလျင်လှုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၀ါရှင်တန် အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းတိုင် အက်ကွဲခဲ့
အမေရိကန်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် သြဂုတ် ၂၃ ရက်နေ့က ရာစုနှစ်တစ်ခု အတွင်း အပြင်းထန်ဆုံး ငလျင်လှုပ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး ၀ါရှင်တန် အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းတိုင် အက်ကွဲခဲ့သည်။ ငလျင်လှုပ်မှုကြောင့် နယူးယောက်ရှိ မိုးမျှော် အဆောက်အအုံများမှ အလုပ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာ ရွှေ့ပြောင်း ထွက်ပြေးခဲ့သည်။
အရှေ့ဘက် ကမ်းရိုးတန်းတွင် ငလျင် ကြီးကြီးမားမား လှုပ်မှုမှာ ကြုံတောင့်ကြုံခဲ ဖြစ်ပွားမှု ဖြစ်သည်။ ငလျင်လှုပ်ပြီးနောက် လူအများ ပြေးလွှားသွားလာမှုများသည် အယ်လ်ကေးဒါးများ တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့် ဆယ်နှစ် ပြည့်တော့မည် ၉/၁၁ ဖြစ်စဉ်ကို ပြန်လည် ခံစားမှုများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
''၀ါရှင်တန် အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ရဲ့ထိပ်မှာ အက်ကွဲမှု ဖြစ်ခဲ့တယ်''ဟု အမျိုးသားပန်းခြံ လုပ်ငန်းမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ တစ်ဦး Bill Line က ၀ါရှင်တန်ပို့စ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ မျက်နှာလေးဖက်ရှိ ထိပ်ချွန်
မော်ကွန်းကျောက်တိုင်ကို အတိအကျ မသတ်မှတ်ရသေးသည့် အချိန်ကာလတစ်ခု အထိ ပိတ်ထားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားခဲ့သည်။
အလုပ်သမား ထောင်ပေါင်းများစွာသည် ရုံးအဆောက်အအုံများမှ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး Manhattan ရှိ လမ်းများအတွင်း လူများပြည့်နှက်မှုများ ဖြစ်ခဲ့သည်။
ပြင်းအား ၅ ဒသမ ၈ ရှိ ငလျင်လှုပ်မှုမှာ အချိန် စက္ကန့် ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်းသာ ရှိခဲ့ပြီး ဗာဂျင်နီးယားမြို့အောက်ဘက် ၃ ဒသမ ၇ ကီလိုအကွာကို ဗဟိုပြုပြီး လှုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘော့စ်တန်နှင့် ကနေဒါ အရှေ့ပိုင်း
ဒေသများတွင်လည်း ငလျင်ဒဏ် ခံစားခဲ့ရသည်။ပင်တာဂွန်၊ US Capitol နှင့် ၀ါရှင်တန်၏ အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်း ကျောက်တိုင်များမှာ ဘေးကင်းခဲ့သည်။
ငလျင်လှုပ်ချိန်တွင် သမ္မတ အိုဘားမားသည် မန်ဆာချူးဆက် ကမ်းခြေနှင့် မိုင် ၅၀၀ ကျော် အကွာတွင် ဂေါက်ရိုက်နေသောကြောင့် ငလျင်လှုပ်မှုကို မကြုံတွေ့ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ငလျင်ဗဟိုချက်မသည် ဗာဂျီးနီးယား၊ Richmond မှ ၃၈ မိုင်နှင့် ၀ါရှင်တန်မှ ၈၄ မိုင် အကွာတွင် ရှိကြောင်း အမေရိကန် ဘူမိဗေဒ လေ့လာရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ယခု ငလျင်သည် ၁၈၉၇ ခုနှစ်ပြီးနောက်
ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်တွင် အင်အား အကြီးဆုံး ငလျင် ဖြစ်သည်။
Posted by Unknown at 11:16 PM5comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: ကမ္ဘာ့ သတင်း
ငါတို့သောက်ခဲ့ကြတာပါ ၊ ငါ့တို့ အသက်တွေ
ငါတို့အသွေးတွေ ဒီရေ နဲ့ ဆက်ခဲ့တာပါ
မြစ်ဧရာဟာ ငါတို့အားလုံးရဲ့ သွေးသားပါ
ဒီရေဟာ ငါတို့သွေးသား ၊ ဒီမြေဟာ ငါတို့သွေးသား
ဇတ်တူစား မစားသင့်တာ လူမှန်သမျှ သိကြတာပါ
ငါတို့သွေးကို ငါ့တို့မသောက် ရက်ပါဘူး
ငတ်ရင်တောင် ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် လှီးစားလို့မှ အာဟာရမဖြစ်တာကို။
စားစရာ ၀ လို့ ထားစရာ မဆန့်သူတွေက
ရက်စက်မှုအပေါင်းကို သရဖူ ဆောင်းနိုင်ဖို့
ယုတ်မာမှု မကိုဋ်ကို ဆင်မြန်းနိုင်ဖို့
ကောက်ကျစ်မှု ခြုံထည်လွှာ ခြုံလွှမ်းနိုင်ဖို့။
တစ်ကယ်တော့ ခန္ဓာကို ရင်းတဲ့သူတွေတောင်
နေ့တဓူဝ ၀မ်းစာနဲ့ မိသားစုဝမ်းရေးမို့ ရင်းရတာပါ ။
နှိုင်းစရာရှားပေမယ့် လူတစ်စုက တုနိုင်းမဲ့တွေ မဟုတ်ဘူး
နှိုင်းစရာ ပမာပေးပေမယ့် ညဥ့်ငှက်တွေကိုတောင် အားနာမိတယ်။
တစ်ကယ်တော့ သွေးသားကို ရောင်းစားတဲ့သူတွေဟာ.....
Posted by မိုးယံ at 6:57 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: ကဗျာ, ရေးမိရေးရာ လျှောက်ရေးတာ
Free virus software key (ကွန်ပျူတာ သုံးနေသော သူငယ်ချင်းများ အတွက်)
Avast! Free Antivirus လေးကို ကျွန်တော်သုံးနေတာ ကြာနေပီ။ အခုမှ လမ်းကြုံလို့ တင်ပေးဖြစ်တာပါ။ ဟိုနေ့က သူငယ်ချင်းဆီ အလည်သွားတော့ သူစက်မှာ ထည့်ထားတဲ့ virus software က ခဏခဏ Update လုပ်ပေးနေရတယ်။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ငါသုံးနေတဲ့ Avast! Free Antivirus လေးသုံးကြည့်ပါလား ဆိုပြီး ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ သူလည်း ကြိုက်သွားတယ်။
ဒီ Avast! Free Antivirus လေးက တကယ်ကောင်းပါတယ်။ ဝယ်စရာမလိုပါဘူး သူငယ်ချင်းတွေလည်း လိုချင်တယ် ဆိုရင် Avast! Free Antivirus software ကို ဒီမှာဒေါင်းပြီး စက်ထဲရောက်တာနဲ့ install လုပ်ပီး KEY လေးထည့်လိုက်ပါ။ KEY ရှာပြီးတင်ပေးထားပါတယ်။ 2038 အထိဖရီး သုံးနိုင်ပါတယ်ဗျာ ...
KEY မထည့်တတ်သော သူငယ်ချင်းများအတွက် Video ဖိုင်လေးလည်း တင်ပေးထားပါတယ်။ သေချာအောင် ကြည့်ပြီး လုပ်နော် ... Avast! Free Antivirus software ကို ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။ ကီးကို အောက်မှာ ယူပြီးထည့်လိုက်နော်။
ကွန်ပျူတာ သုံးနေသော သူငယ်ချင်းများ Virus ကင်းဝေးပြီး အဆင်ပြေပြေ သုံးနိုင်ကြပါစေဗျာ။
SERIAL CODE:- W6754380R9978A0910-4TZ59467
Posted by Unknown at 12:59 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: နည်းပညာ, ဆော့ဝဲလ်
UNHCR နဲ့ မလေးရှားအစိုးရ ပူးပေါင်းချက်အရ Selangor နဲ့ Kuala Lumpur မှာရှိတဲ့ UNHCR ကဒ်နဲ့ စာရွက်ကိုင်ဆောင်ထားသူများ အားလုံး မနက်ဖြန် ၂၃-၀၈-၂၀၁၁ ကစပြီးPutra Jaya Immigration ရုံးကြီးမှာ လက်ဗွေနှိပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း အသ်ိပေးအပ်ပါသည်။
၄င်း Putra Jaya Imm ရုံးသို့ မသွားနိုင်သူများ MKO ရုံးသို့ နံနက်(၇း၀၀)အရောက် လာရောက်ရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ဗွေနှိပ်မည့်ရက်ကို မနက်ဖြန်မှစတင်ပြီး သောကြာနေ့
အထိ ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်သိချင်ပါက MKO ရုံးဖုန်း- ၀၃- ၉၂၂၂၀၅၂၄၊
၀၁၆- ၃၅၉၁ ၉၂၅
၀၁၉- ၇၇၇ ၈၃၀၃၊
၀၁၀- ၂၄၃ ၈၄၀၅
Posted by မိုးယံ at 2:52 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်း အပြည့်အစုံ
ဓာတ်ပုံ - AP
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရန် ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သရင်း နှုတ်ခွန်းဆက်သအပ်ပါတယ်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့အညီ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲများကို အေးချမ်းအောင်မြင်စွာ ကျင်းပ ပြီးစီးပြီးနောက် ပထမအကြိမ် လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ရဲ့ အစည်းအဝေးတွေကို အောင်အောင်မြင်မြင် ခေါ်ယူကျင်းပ နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဤလွှတ်တော်ကြီးက ကျွန်တော့်အား နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းခံရပြီးနောက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရ အဆင့်အဆင့်ကို ဖွဲ့စည်းထူထောင် ထားရှိပြီး စနစ်တကျ လည်ပတ်နေပြီး ဖြစ်ပါတယ် အလားတူ ဒီလွှတ်တော်ကြီးကပဲ သဘောတူ အတည်ပြုပေးလိုက်သည့် ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးဆောင်တဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင်ဟာလည်း ဥပဒေနဲ့အညီ တရားစီရင်ရေး၊ ဥပေဒေအရ ကန့်သတ်ချက်များအမှအပ ပြည်သူ့ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ရေး၊ အမှုများတွင် ဥပဒေအရ ခုခံချေပပိုင်ခွင့်နှင့် အယူခံပိုင်ခွင့် ရှိရေးစတဲ့ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အခြေခံမူများနဲ့အညီ တိကျမှန်ကန်စွာ ထမ်းရွက်နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
လွှတ်တော်အရပ်ရပ်ရဲ့ အဓိက တာဝန်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဥပဒေပြုရေးနှင့် အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရေးတို့ကို ထိထိရောက်ရောက် အောင်အောင်မြင်မြင် ထမ်းဆောင်နိုင်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လွှတ်တော်ကော်မတီများ၏ စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မားရေးအတွက် Capacity Building ကို အင်တိုက်အားတိုက် ဆောင်ရွက်နေကြသည်ကိုလည်း ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရာ တွေ့မြင်ရပါတယ်။
ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် နိုင်ငံတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ပန်ဆင်ပြီး ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေးဆိုတဲ့ မဏ္ဍိုင်ကြီး သုံးရပ်ရဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှုများနဲ့အညီ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်တွေ့ကျကျ အသက်ဝင် ပုံပေါ်လာအောင် ပုံဖော်တည်ဆောက် ထမ်းရွက်ကြနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ်သစ်၊ စနစ်သစ်တစ်ရပ်ကို ချောမွေ့ညင်သာ အောင်မြင်စွာ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ အချုပ်အခြာ အာဏာကြီး သုံးရပ်ကို စနစ်တကျ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ အသက်ဝင်လာအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးကိုယ်စား ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ဦးစွာ ပဏာမ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ကျွန်တော်နှင့်တစ်ကွ အစိုးရအဆင့်ဆင့်၊ နာယကြီးနှင့်တစ်ကွ လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တို့ဟာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအပေါ် သစ္စာစောင့်သိ ရိုသေပြီး ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံး ညီညွတ်မှု မပြိုကွဲရေး၊ အချုပ်အခြာ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့ကို ထာဝစဉ် ဦးထိပ်ပန်ဆင် ထမ်းဆောင်ပါမည်ဟု ကတိသစ္စာပြုထားကြသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က အပ်နှင်းထားတဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့ တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ထိရောက် မှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးပြီး အမျိုးသား အကျိုးစီးပွားကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်း နိုင်ငံတော်နှင့် တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ရှေ့ရှုပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါးကို ဖွင့်လှစ်ကာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာကို ထုတ်ဖော်ပြသ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ စကား၊ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နည်းပါးနေတဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ တည်ငြိမ် အေးချမ်းမှု ခိုင်မာလာတာနဲ့အမျှ စီးပွားရေး အခြေအနေကောင်းတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ တိုးတက် ဖြစ်ပေါ်လာ အောင် ကုန်သွယ်ရေးနယ်မြေတွေ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ ဖန်တီးဖော်ဆောင်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အလားတူ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံနိုင်ကြသေးတဲ့ ပြည်တွင်းနိုင်ငံရေး အင်အားစုများကိုလည်း သဘောထားအမြင် ကွဲလွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နေခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေ လျော့ပါးအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်တွေ ထွန်းကားပြန့်ပွားလာအောင် စတင်ကူးပြောင်း ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဒီကနေ့ ဒီအချိန်မှာ မိမိတို့နိုင်ငံရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်တဲ့လွတ်လပ်မှုကို ဖော်ဆောင်ရာမှာ တွဲလျက် တည်ရှိနေတဲ့ တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်သိမှုဆိုတဲ့ Democratic Spirit ကိုလည်း ခိုင်မာလာအောင် ကိုယ်စီကိုယ်စီ ထူထောင်တည်ဆောက် သွားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Democratic Pratices ဖော်ဆောင်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း သိသာမြင်သာတဲ့ တိုးတက်မှုတွေ၊ ရလာဒ်ကောင်းတွေ စဉ်ဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်စေဖို့ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အာဏာကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -
ပြည်သူအများ မျှော်လင့်နေကြတဲ့ ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေး (Good Governance)၊ သန့်ရှင်းသော အစိုးရ (Clean Government)၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် (Democratic Pratice) များ ထွန်းကားရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေး၊ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှု လျှော့ချရေး၊ သဟဇာတဖြစ်သော လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပေါ်ရေး၊ စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး စတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်း ဤလွှတ်တော်အား ကတိပြုပြောကြားထားချက်များနှင့်အညီ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။
ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို ဦးထိပ်ထားရပါ့မယ်။ ပြည်သူလူထု စိတ်ကျေနပ်မှု၊ ပြည်သူလူထု စိတ်ချမ်းသာမှုကို ထမ်းဆောင်ကြတဲ့၊ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ယုံကြည်ကိုးစား အားထားမှုကို ခံယူထိုက်တဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် ပညာပေးခြင်း၊ သတိပေးခြင်း၊ အရေးယူခြင်းများ ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ပြောင်းနေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စနစ်ကိုပါ ပြောင်းလဲနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရာမှာ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်တွေ၊ ကြိုးနီစနစ်တွေ ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ထားသူတွေ၊ တာဝန်သိမှု၊ တာဝန်ယူမှု ကင်းမဲ့ပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများကိုလည်း ထိရောက်စွာ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ အုပ်ချုပ်ချုပ်ရေး အာဏာဟာ ပြည်ထောင်စုတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ တည်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့များရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ္ဍာန်များကိုလည်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပေဒနှင့်အညီ အသက်ဝင် အကောင်အထည် ပေါ်လာစေရန်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်သစ်၊ အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ္ဍာန်သစ်ကို စတင်ဖော်ဆောင်ရချိန် ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အစိုးရများရဲ့ Institutional Building နှင့် Capacity Building တို့ဟာလည်း အရှိန်အဟုန် ရရှိလာတာနဲ့အမျှ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များရဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းမှု လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ခိုင်ခိုင်မာမာ ပုံဖော်တည်ဆောက်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအဆင့်မှသည် ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သော အုပ်ချုပ်ရေး မဏ္ဍိုင်ကြီးများဟာလည်း ဥပဒေများ စနစ်တကျ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာ ပိုမို ထိရောက်မှန်ကန်သော၊ ပြည်သူလူထု ပါဝင်မှုကို ရှေးရှုဦးတည်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် အုပ်ချုပ်ရေး အသွင်သဏ္ဍာန်များ ဖြစ်ပေါ်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာစေရန်အတွက် ဤလွှတ်တော်သို့ ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ်များနဲ့အညီ ငွေကြးမူဝါဒ၊ ဘဏ္ဍာရေးမူဝါဒ၊ ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မူဝါဒများကို ပြန်လည်သုံးသပ် လေ့လာပြီး စီးပွားရေးကဏ္ဍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလည်း အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူများ၊ တောင်သူ လယ်သမားများနှင့် အလုပ်သမားများ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် တတ်နိုင်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက်ရမည် ဟူသည့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေး လုပ်ငန်းများကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ လက်တွေ့ကျကျ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အသေးစား ငွေရေးကြေးရေး လုပ်ငန်းများ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူ ခေတ်၊ စနစ်နှင့် မလျောညီတော့တဲ့ အငြိမ်းစား ဝန်ထမ်းများရဲ့ ပင်စင်လစာ၊ နိုင်ငံရေးပင်စင် လစားမျာကိုလည်း ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ ဥပဒေများနဲ့အညီ ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးလျက် တိုးမြှင့် သတ်မှတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ထောင်စုနှစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်မှန်းချက်နဲ့အညီ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နှုန်းထား (၁၆ %) အထိ လျှော့ချနိုင်အောင် ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုဆောင်ရွက်ရာမှာ လက်ရှိအချိန် နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှု နှုန်းထား အတက်အကျ မတည်ငြိမ်မှုများ၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွင် မသေချာမရေရာ ဖြစ်ပေါ်မှု အနေအထားများ၊ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းပြီး ရေလွှမ်းမိုးမှု အန္တရာယ် ကျရောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့အတွက် စပါးစိုက် တောင်သူလယ်သမားများ အနေဖြင့် ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ရှိနေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေပါ " နိုင်ငံတော်သည် စိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်သည့် ကောက်ပဲ သီးနှံများ သင့်တင့်မျှတသည့် တန်ဖိုးရရှိရန် ကူညီဆောင်ရွက်မည် " ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ တောင်သူလယ်သမားများ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ် မကာမိသည့်အပြင် ဈေးနှိမ်ခံရခြင်းစတဲ့ အခက်အခဲများမှ လွတ်ကင်းစေရန်လည်း ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍနဲ့ ပူပေါင်းပြီး ကူညီပံ့ပိုးမှုများ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျှက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တောင်သူလယ်သမားများ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်မှ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားသည့် လယ်မြေများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စိတ်ချလက်ချဖြင့် သားစဉ်မြေးဆက်တိုင် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်အောင် အစီအမံများလည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ်များရဲ့ မတည်ငြိမ်မှု၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး အခြေအနေ ယိမ်းယိုင်နေမှု စတဲ့ External Factor များကြောင့်လည်း ပြည်တွင်း စီးပွားရေးအပေါ် ရိုက်ခတ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ ဒီလို ဆက်နွယ်ဖြစ်ပေါ်မှုများအရ ကျွန်တော်တို့ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေမှာ အကျပ်အတည်းအချို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပြည်ပ ကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းတွေ ပိုမိုမြန်ဆန် သွက်လက်လာအောင် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်တွေကို အများဆုံး နှစ်ပတ်အတွင်း ရရှိအောင်၊ ကုမ္ပဏီထူထောင်ခွင့် လိုင်စင်တွေကို အများဆုံး နှစ်လအတွင်း ရရှိအောင်၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်တွေ အများဆုံး (၂၁) ရက်အတွင်း ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သလို ပို့ကုန်အပေါ် ကောက်ခံတဲ့ အခွန်နှုန်းထားကိုလည်း (၇) ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံစေတဲ့ စနစ်ကို ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲ ဆောင်ရွက်ပေးခဲပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း ပို့ကုန်လုပ်ငန်းနယ်ပယ် အချို့မှာ အခက်အခဲတွေနဲ့ ဆက်လက် ရင်ဆိုင်နေရဆဲ ဖြစ်တာကို တွေ့ရှိရတဲ့အတွက် ပို့ကုန်တွေအပေါ် ကောက်ခံနေတဲ့ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်များကိုလည်း (၆) လသက်တမ်းနဲ့ ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စက်မှုနိုင်ငံ ထူထောင်ရေးအတွက် အဓိက အသက်သွေးကြော ဖြစ်တဲ့ အသေးစားနှင့် အလတ်စား စက်မှုလုပ်ငန်းတွေ အရှိန်အဟုန်နဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာအောင် လုပ်ငန်းပမာဏပေါ် မူတည်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဆင်ပြေ လွယ်ကူစေအောင်လည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ ပြင်ဆင်သတ်မှတ် ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများကို အကြောင်းပြုပြီး မသမာတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်ဖို့၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ မူဝါဒတွေကို လေးစားလိုက်နာကြဖို့၊ စည်းကမ်းရှိဖို့၊ ကိုယ့်အကျိုးစီးပွားကိုပဲ ရှေ့တန်းမတင်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်မှုနှုန်းထား အပါအဝင် စီးပွားရေးမူဝါဒများကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ၊ ခေတ်၊ စနစ်နှင့်အညီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို အလွှာစုံ တက်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲက ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အကြံပြုချက်၊ ရလာဒ်များကို စနစ်တကျ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကာ နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ နေ့စဉ် လူမှုစီးပွားဘဝတွေကို ရေတို၊ ရေရှည် ထိခိုက်နစ်နာမှု မရှိစေဖို့ သတိရှိရှိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာလည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေး၊ ငွေကြေး ဖြစ်ပေါ် တိုးတက်မှုများ၊ ပြည်တွင်း စီးပွားရေး အခြေအနေများနှင့်အညီ မျက်ခြေမပြတ် အနီးကပ် စောင့်ကြည့်လေ့လာပြီး တစ်မျိုးသားလုံး အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို ပြည်ထောင်စု အစိုးရရဲ့ အုပ်ချုပ်ရေး အခွင့်အာဏာနဲ့အညီ အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့အညီ တရားသဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရေး၊ လူတိုင်းလူတိုင်း တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးများ ရရှိရေးတို့ကို အစွမ်းကုန် မြှင့်တင်ပေးပြီး မလိုအပ်သော အပိုကုန်ကျစရိတ် Transactional Cost များ လျော့နည်းကျဆင်းရေး၊ ကြိုးနီစနစ်များ ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရေး၊ ဈေးကွက်စီးပွားရေး ယန္တရားများ အသက်ဝင် ရှင်သန်ခိုင်မာလာရေး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အခြေခံတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရေးတို့ကို အလေးအနက်ထား ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီးလည်း နိုင်ငံတော်ရဲ့ စီးပွားရေးမဏ္ဍိုင်မှာ Key Driver များဖြစ်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ဦးဆောင်အသင်း အဖွဲ့များနဲ့လည်း စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ဆွေးနွေးပြီး နိုင်ငံတော်နဲ့ ပြည်သူများရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်၊ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အပိုင်းနဲ့ ပုဂ္ဂလိကအပိုင်း အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပမှ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စီးပွားရေး အခက်အခဲများကို စုပေါင်းတိုင်ပင် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းခြင်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပြီး Public Private Partnership လမ်းကြောင်းကို ခိုင်မာသည်ထက် ခိုင်မာအောင် ပုံဖော် တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍကလည်း မိမိတို့အပိုင်းက စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်များ တိုးမြှင့်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ကြရာမှာ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးအတွက် ခိုင်မာတဲ့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီးဖော်ဆောင် ပေးနိုင်အောင်၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အမျိုးသား ကုန်ထုတ်စွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားလာအောင်၊ နောင်အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် ဒေသတွင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်မှုဝန်းကျင်မှာ အရည်အသွေးနဲ့ စံချိန်စံညွှန်း မြင့်မားတဲ့ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတွေ တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်နိုင်အောင် နိုင်ငံတော်နဲ့အတူ လက်တွဲပူးပေါင်း ကြိုးပမ်းအားထုတ် သွားကြဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နာယကကြီးနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ခင်ဗျား -
နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးများးကို အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ရေး၊ တောင်သူလယ်သမားများ၏ လယ်ယာလုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေများကိုလည်း ခေတ်နှင့်အညီ ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုများကို ခေတ်နှင့်အညီ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြှင့်တင်ရေးတို့ကို ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည့် သတင်းမီဒီယာများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ ဥပေဒေများကို နိုင်ငံတော်၏ ပကတိ အခြေအနေမှန်နှင့်အညီ ပြဋ္ဌာန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုလည်း အထူး အလေးထား ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အနေနဲ့လည်း ဝိုင်းဝန်းဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြင်ဆင် ပြဋ္ဌာန်းပေးကြရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကို အစဉ်အမြဲ ဒွန်တွဲပြီး အဘက်ဘက်မှ လေ့လာသုံးသပ် ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ငန်းများမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ပညာရှင်များ၊ NGO အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို ထိပါးခြင်း မရှိခဲ့သော အစဉ်အဆက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ နိုင်ငံခြားရေး မူဝါဒအစဉ်အလာကို ဆက်ခံကျင့်သုံးလျက် ရှိသော ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနှင့် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံလျက် ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း တာဝန်ကျေပွန်သော ကမ္ဘာမိသားစုဝင် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ထည်ထည်ဝါဝါ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်းပဲ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ အနေနဲ့ ၂၀၁၄ ခုနှစ် အာဆီယံ အလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ကို ရယူထမ်းဆောင်ဖို့ တရားဝင် အဆိုပြု ကမ်းလှမ်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆီယံ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံး၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြိုဆိုနေပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ဒီကနေ့ သဟဇာတဖြစ်တဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ဖော်ဆောင်နိုင်မယ့် ဒီမိုကရေစီ မြန်မာ့လူဘောင်ကို ချောမွေ့ညင်သာစွာ ကူးပြောင်းနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ကမ္ဘာ့မျက်မှောက် အခြေအနေကို လေ့လာကြည့်ရင် ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်းကူးပြောင်းမှုဟာ နိုင်ငံတော်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ကူးပြောင်းမှု တစ်ရပ် ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို အထင်အရှား တွေ့မြင်ကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အစိုးရအပေါ် တားဆီးနှောင့်ယှက်မှုတွေ ရှိနေပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ စိတ်ဓါတ်ကျစရာ၊ စိတ်ပျက်စရာ အကြောင်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့မှာ စည်းလုံးညီညွှတ်တဲ့ ပဉ္စမ မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ ပြည်သူလူထုကြီး ရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်းကြောင်းမှာ၊ ခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ၊ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုများကြားမှာ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အခါမျိုးမှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးရဲ့ ညီညွတ်မှုအားနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကျော်လွှား အောင်မြင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ဒီအချိန် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက တစ်ခဲနက် ထောက်ခံအတည်ပြု ပေးထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရှိပါတယ်။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ ထွက်ပေါ်လာပြီ ဖြစ်တဲ့ အစိုးရ ရှိနေပါတယ်။ အပြန်အလှန် ထိန်းကျောင်းရေး မဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ လွှတ်တော် အရပ်ရပ် ရှိနေပါပြီ။ သီးခြားတည်ရှိနေတဲ့ တရားစီရင်ရေး မဏ္ဍိုင် ရှိနေပါပြီ။ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်တဲ့ မီဒီယာတွေ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးလာနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကို မယုံကြည်သေးတဲ့သူတွေ ယုံကြည်လာအောင်၊ မမြင်ကြသေးတဲ့သူတွေ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မြင်တွေ့လာအောင် နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လက်တွဲပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားဖို့ ကျွန်တော်တို့ အသင့်ရှိနေပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပါ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဥပဒေနဲ့အညီ ပေးအပ်နိုင်အောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရဟာ လသားအရွယ် အစိုးရတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသက်တမ်း နုနယ်သေးပေးမဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ အစိုးရအနေနဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ အသီးသီးမှာ ပြည်သူလူထု အကျိုးကို ရှေ့တန်းတင်ပြီး ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဖွဲ့တစ်ရပ်ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု အရည်အသွေးကို အစိုးရသက်တမ်း တစ်ခုလုံးနဲ့မှသာ တိုင်းတာ သတ်မှတ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အစိုးရကို ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံး၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေနဲ့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်က ယုံယုံကြည်ကြည် အပ်နှင်းထားတဲ့ တာဝန်၊ ကျေပွန်ရမယ့် ဝတ္တရားတွေကို တတ်နိုင်သမျှ အစွမ်းကုန် ထမ်းဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကြီးလေးတဲ့ တာဝန်တွေကို ယုံကြည်လေးနက်စွာ ကျွန်တော်တို့ ပခုံးထက်မှာ တင်ထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အသက်ဝင်အောင် လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာမှာ ကျွန်တော်နဲ့ ဒုတိယ သမ္မတ (၂) ဦးက အစပြုလို့ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဆင့်အထိ အဆင့်ဆင့်သော ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ တစ်ရပ်လုံး အနေနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကို ထိထိရောက်ရောက် မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြစ်အောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် သွားကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့အစိုးရဟာ ပြည်သူတွေ ဖြစ်နေတာတွေ၊ ပြည်သူတွေ ဖြစ်ချင်တာတွေကို ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက် နိုင်အောင်လည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါတယ်။ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်တာနဲ့ အညီ ပြည်သူလူထု အကျိုးစီးပွားကို အစွမ်းကုန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားရင်း နိဂုံးချုပ်အပ်ပါတယ် ခင်ဗျား။
(၂၂ - ၈ - ၂၀၁၁)
Posted by Unknown at 12:40 AM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တပ်သားသစ် စုဆောင်းရာတွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ၍ အရေးယူခဲ့ရသူ အရာရှိ၊ စစ်သည် ၁၆၉ ဦး ရှိခဲ့
တပ်သားသစ် စုဆောင်းရာတွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိ၍ အရေးယူခဲ့ရ သူ အရာရှိ၊ စစ်သည် ၁၆၉ ဦးရှိခဲ့ ကြောင်း ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်း ထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက ပြောကြား ခဲ့သည်။
နေပြည်တော်တွင် သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့က ပြောရေးဆိုခွင့်နှင့် သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့က ကျင်းပ သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ (၁/ ၂၀၁၁)တွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း က အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေးသူငယ်များအား စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ် တားဆီးရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း အလေးထား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အရွယ်မရောက်သေးသော ကလေး သူငယ်များအား စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရေး ကော်မတီကို ၅-၁-၂၀၀၄ ရက်နေ့မှာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး အဲဒီ ကော်မတီက လိုအပ်သော အမိန့် နဲ့ ညွှန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာရေးနဲ့ အစီရင်ခံရေး ယန္တရားတစ်ခု ထူထောင်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ Action Plan ရေးဆွဲနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ၂၃-၅-၂၀၁၁ ရက် နေ့မှာ အဲဒီကော်မတီကို ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၀န်ကြီး ဦးဆောင်ပြီး အဖွဲ့ဝင်ရှစ်ဦးနဲ့ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါ တယ်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် ကော်မတီဖွဲ့ စည်းပြီးချိန်မှ ယခုနှစ်ဇွန်လအထိ တပ်သားသစ် စုဆောင်းရာမှာ ညွှန် ကြားချက်နဲ့အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိသူ အရာရှိ ၂၃ ဦး၊ စစ်သည် ၁၄၆ ဦးတို့ကို စစ်စည်းကမ်းအရ အရေးယူခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါတယ်” ဟု ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်း က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကလေး သူငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ ကွန် ဗင်းရှင်းစာချုပ်ကို သဘောတူညီခဲ့ပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ တွင် CRC စာချုပ် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်းနှင့် ထိုသို့ ဖြစ်လာပြီးနောက် ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့် အညီ ကလေးသူငယ် ဥပဒေကို ၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၄ ရက်နေ့တွင် ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များသည် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ကလေးသူ ငယ်များအား တပ်မတော်အတွင်းသို့ စုဆောင်းမှုကို တားမြစ်ထားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရွယ် မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းခြင်းမှ ကြိုတင်ကာကွယ် ရေး အသိပညာပေး သင်တန်းများကို ပို့ချလျက်ရှိသည်။
Posted by Unknown at 10:12 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အမေရိကန်စာရေးဆရာ မာ့ခ်တွိန်၏ နေအိမ်ပြတိုက်မှ ဒေါ်လာတစ်သန်း အခိုးခံရ
နယူးယော့ခ်- မာ့ခ်တွိုင်းသည် သူ၏ စာအုပ်များထဲတွင် ကိုယ်ကျင့်တရား ကို သင်ယူလေ့လာရန်အတွက် ရာဇ၀တ်မှုများ ကျူးလွန်ရ မည်ဟု ဟာသသဘော ဖြင့် ပြောဖူးခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်၍ နေအိမ် ပြတိုက်မှ ဒေါ်လာ တစ်သန်း အခိုးခံရသောအခါ ထင်ရှား ကျော်ကြား သော အမေရိကန် စာရေး ဆရာကြီး ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားမည် မဟုတ်နိုင်ပေ။
ဒိုနာဂရီဂေါဟု အမည်ရသော အသက် ၅၈နှစ်ရှိ အမျိုးသမီးသည်ကော်နာတီကပ်ပြည်နယ် ဘရစ်ပို့သ်တွင် ကြေးနန်းဖြင့် ငွေလိမ်လည် ရယူမှု၊ အခွန်လိမ်မှုစသည်တို့ကို မာ့ခ်တွိုင်း နေအိမ်ပြတိုက်မှ အလွဲသုံးစားလုပ် ရယူခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။ ဂရီဂေါဆိုသူ အမျိုးသမီး သည် Huckleberry Finn ၀တ္ထုကို ရေးခဲ့သော ၁၉ ရာစုခေတ် စာရေးဆရာကြီးကို ရည်စူး၍ တည်ထောင်ထားသော ပြတိုက်၏ အလုပ် သမားတစ်ဦးဖြစ် သည်။
သူမသည် အလုပ်ရှင်ထံမှ စာရင်း လိမ်ပြီး ငွေရယူခဲ့သည့်အပြင် သူ ရပိုင် ခွင့်မရှိသော လစာများကိုလည်း အပို ထုတ်ယူခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ ထိုသို့ သူ လိမ်လည်၍ရရှိလာသော ငွေများကို သူမကိုယ်ပိုင် အိမ်ပြုပြင်ရန်၊ လက်မှတ်ဝယ်ယူရန်၊ ညစာအပြင်ထွက် စားရန်၊ အပေါင်ပြန်ရွေးရန်၊ ကြွေးဝယ် ကတ်ဖြည့်ရန်၊ ကားဝယ်ရန် အသုံးပြုခဲ့ သည်ဟု ကော်နာတီကပ်တရားရုံးချုပ်က ဆိုသည်။ သူသည် ထောင်ဒဏ် ၂၃ နှစ်ကျခံ ရဖွယ်ရှိပြီး ဒဏ်ငွေဒေါ်လာနှစ်သန်း ပေးဆောင်ရနိုင်ပါသည်ဟု ၎င်းတရားရုံး ချုပ်က ဆိုသည်။
တွိုင်းသည် ကော်နာတီကပ်ပြည် နယ် ဟားဒ်ဖို့ဒ်မြို့တွင် ၁၈၇၄ ခုနှစ်မှ ၁၈၉၁ ခုနှစ်အထိ နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူ၏ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ငွေကြေးအတွက် ဟာသနှော ပြောကြားခဲ့သော အဆို အမိန့်များတွင် ရာဇ၀တ်မှုကို ကျူးလွန် ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ကျင့်တရားအစစ်ကို သိရှိလာနိုင်ကြောင်း သူက ဟာသနှော မိန့်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Posted by Unknown at 12:14 AM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အဖြူရောင်နတ်သမီး (နမ်းမ၀) ပတ်သက်သူများအတွက် အရေးပေါ်
6:25 PM နမ်းမဝ ဆိုပြီး လင့်ပို့ရင်မဖွင့်ဖို့နဲ့ နမ်းမဝ မဟုတ်ပါကြောင်း
နမ်းမဝ FB အကောင့်ကို block လုပ်ပေးစေကြောင်းလေး
6:26 PM me: တင်လိုက်ပြီ
6:27 PM မချောတို့ထိမှာဆိုးလို့
6:28 PM me: အိုကေပါ
6:31 PM white: ငါ့ကို မဟုတ်တာတွေ ရေးထားတယ်ဆို
သတိထားသင့်သူများက သတိထားပြီး ခဏ ဘလော့ခ်(Block) လုပ်ထားပြီး၊ တတ်နိုင်သူများ တတ်သိသူများက နတ်သမီးနှင့် အပေါင်းအပါများအား ကယ်တင်ပေးကြပါဗျာ.. ကျွန်တော်ကတော့ အိုင်တီ သူငယ်တန်းတောင် ၀င်ခွင့်မအောင်တဲ့ ကောင်မို့ နကန်းတစ်လုံး မသိသူပါ ..သူက တင်ပေးဆိုလို့သာ တင်ပေးရတာ ဘာတွေဖြစ်ပြီး ကိုယ်လဲ ဘာတွေ ဒုက္ခရောက်ဦးမလဲ မသိ။
Posted by မိုးယံ at 6:31 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
၆ လ အခွန် လျော့ပေါ့ခြင်း
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန	| ကြာသပတေးနေ့၊ သြဂုတ်လ ၁၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၇ မိနစ်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
၁၃၇၃ခုနှစ် ဝါခေါင်လပြည့်ကျော် ၄ရက် (၂ဝ၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၈ရက်)
၁။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာနသည် ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄တွင် အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး
၍ ၂ဝ၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်
ပြည်ထောင်စု အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၈/၂ဝ၁၁) မှသဘောတူခွင့်ပြုချက်အရဤ အမိန့်ကြောငြာစာ
၂။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန၏ ၅- ၆ -၂ဝဝ၆ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၁၂၄/၂၀၀၆ ၏ အပိုဒ် ၂၊ အပိုဒ်ခွဲခနှင့် အပိုဒ် ၃တို့တွင် ထုတ်ပြန် ပြဌာန်းချက်များအရ ပြည်တွင်းနေ နိုင်ငံသားနှင့် ပြည်ပနေ နိုင်ငံသားများ
က နိုင်ငံခြားငွေဖြင့် ရရှိသည့် လစာခေါင်းစဉ်မှ ဝင်ငွေ စုစုပေါင်းအပေါ် ရရှိသည့် နိုင်ငံခြားငွေ အမျိုးအစားဖြင့်
ပေးဆောင်စေသည့် ဝင်ငွေခွန်ကို ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းအစား ၂ ရာခိုင်နှုန်းသို့ လျှော့ပေါ့ သတ်မှတ်လိုက်သည်။
၃။ ဤအမိန့်ကြော်ငြာစာသည် ၂ဝ၁၁ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့မှ စ၍ ၂ဝ၁၂ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ရက်နေ့ထိ
(၆) လ အကျိုးသက်ရောက်စေရမည်။
Posted by မိုးယံ at 12:48 PM2comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ယခုတစ်လော မလေးရှားမှာ ပါမစ်များ တရားဝင်ပြန်ဖြစ်ရေးကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးက နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာ မှရော မီဒီယာ များမှပါ ကြေငြာ ထားတာကို မလေးရှားရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားများ အားလုံးလဲ သိလောက်ပါပြီ။ အခု ပြောပြချင်တာလေးကတော့ အဆင်မပြေ၍ တစ်ဝမ်းတစ်ခါး ရေကြည်ရာမြက်နုရာမှာ မိဝေးဖဝေးဖြင့် လာရောက် ၀မ်းစာရှာနေကြ သော ညီအစ်ကို မောင်နှမ များအား စေတနာရှေ့ထား ပြောပြချင်တာပါ။
တရားဝင် ပါမစ် မရှိသူတွေကတော့ နှိပ်လိုက်တဲ့ လက်ဗွေ၊ ပေးလိုက်ရတဲ့ ပိုက်ဆံ တစ်ရုံးရုံးနဲ့ သောက်သောက်လဲ ပါပဲ။ တစ်ကယ်တော့ မလေးရှားရောက်နေတဲ့ မြန်မာလုပ်သားများနှင့် အခြားနိုင်ငံမှ သူများအားလုံးဆိုလျှင် မလေးရှား လ၀က မှလည်း အားလုံးကို အချိန်မှီ မှတ်တမ်းယူရန်၊ အထောက်အထား ထုတ်ပေးရန် အဆင်မပြေလှပါ ။အခြား နိုင်ငံသားများကိုတော့ ယခုရေးမည့် အကြောင်းအရာတွင် ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါရစေ။ မြန်မာ ပြည်သားများအတွက်သာ အထူးရည်ညွန်းလိုပါသည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မာ အေးဂျင့်များမှ မလေးရှား လ၀က ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသားများကို ၀န်ဆောင်မှု ပေးပါသည်။ ဂျာနယ်များ စာစောင်များတွင်တော့ မလေးရှား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးမှ လာရောက် တပ်ဆင်ပေးသော လက်ဗွေနှိပ်စက်၊ ခွင့်ပြုထားသော အခြား လုပ်ပိုင်ခွင့်များ (သူဌေးမရှိသူများအား လက်ဗွေနှိပ်၍ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ ပါမစ်မကျမှီ သုံးလ ယာယီ အလုပ်လုပ်ခွင့် ရရန် အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ထုတ်ပေးခြင်း၊နိုင်ငံကူးလက်မှတ် အသစ်လျှောက်ထားပေးခြင်း) စသည် စသည် ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှု ပေးကြပါသည်။
ကုန်ကျစားရိတ်များ၏ အသေးစိတ်ကို ၀န်ဆောင်မှုပေးသူများက ဇယားကွက်များဖြင့် ဂျာနယ်များတွင် ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးထားသည်မှ အလွန်ပင် ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းလှပေသည်။ ဥပမာ ကျွန်တော်တို့လို မလေးရှားကို ထွက်လာပြီး နှစ်ရှည်ကြာသည့်တိုင် ပါမစ်ကိစ္စ ၊ စာအုပ်ကိစ္စ ၊ လဲဗီးကြေး၊ အခွန် စသည်တို့အား နကန်းတစ်လုံး နားမလည်သူများအတွက် အဆင်ပြေသင့်လျော်လှပါသည်။
၀န်ဆောင်မှု ပေးသူများမှ ၀န်ဆောင်ခ အဖြစ် တန်ရာတန်ကြေးယူကြပါသည်။ သို့သော် ကျွန်တော် ယခု ပြောပြလိုသည်မှာ လက်ဗွေနှိပ်ခြင်း၊အထွေထွေဝန်ဆောင်ခ၊ လဲဗီး၊ Insurance၊ဆေးစစ်၊ Compound ၊ ပါတ်စ်ပို့ အသစ် စသည့် ကုန်ကျစားရိတ်များထဲမှ “အထွေထွေ ၀န်ဆောင်ခ”အတွက် ဖြစ်ပါသည်။ အထက်က တင်ပြခဲ့သလို ကျွန်တော်လို မသိနားမလည်သူများအတွက်တော့ အထွေထွေ ၀န်ဆောင်ခ အဖြစ် ရင်းဂစ် ၃၀၀ သည် ထိုက်တန်သော ပေးဆပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဘာသာစကားလည်း ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောတတ်၊ လည်လည်ဝယ်ဝယ်လည်း သွားတတ်လာတတ်၊ ပြောရဲဆိုရဲလည်းရှိသော အစ်ကိုအစ်မများအတွက် ၀န်ဆောင်ခ ကို သက်သာစေရန် စေတနာ ရည်သန်ပါသည်။ (သူများ ထမင်းအိုး ထုတ်နှင့်ထိုးရန်တော့ စိတ်ထဲတွင် အလျဉ်းမရှိပါချေ။)
အချို့သော သူများသည် စာအုပ်ရှိသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် တရားဝင်ပါမစ်မရှိကြတော့ပါ။ ထိုကဲ့သို့ သောအစ်ကို အစ်မ၊ ညီငယ် ၊ ညီမငယ် တို့အတွက် သိခဲ့ရသော ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းလေးကို မျှဝေလိုပါသည်။ ၄င်းမှာ အခြားမဟုတ်။ယခင်က ပါမစ်ရှိသူများရော၊ မရှိသူများပါ မလေးရှား လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးရုံးတွင် သွားရောက်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။ ယခုကား မည်သို့သော အကြောင်းကိစ္စကြောင့် ဟု(ကျွန်တော်) သေချာစွာမသိပါ။ယင်း ၀န်ဆောင်မှုအား လ၀က ရုံးတွင်မဟုတ်တော့ပဲ ဘောလုံးကွင်းတွင် ယာယီရုံးဖွင့်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ နေရာ ကျယ်ဝန်းသည်၊ လွတ်လပ်စွာ ထိုင်စောင့်နိုင်သည်၊ လက်ဗွေနှိပ်ခြင်း အမှု ကို သီးသန့်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ မနက်ကိုးနာရီမှ ည ဆယ်နာရီလောက်အထိ အသုတ်ခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
ပါမစ်အမှန်ရှိသူများသည် ငွေကုန်ကြေးကျ တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ မပေးရပါ။ ပါမစ်မရှိသူများကတော့ Form ဖြည့်ရပါမည်။ ၄င်း ရုံး၏ အရှေ့တွင်ပင် ၀န်ဆောင်မှုပေးပါသည်၊ ကုန်ကျငွေ ရင်းဂစ် ၃၅ မျှသာ။ သူဌေးသို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ် ပါရပါမည်။ ယင်းနှစ်မျိုးအနက်မှ ကျွန်တော်သိသော တရားဝင် ပါမစ်သမားများ အတွက် လိုအပ်သည်များကို ပြောပြပါမည်။ လုပ်ဆောင်မှု အဆင့်ဆင့်မှာ သူဌေး(သို့) ကိုယ်စားလှယ်မှ တန်းစီ၍ အထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများ ပြပြီး တိုကင်နံပါတ်ယူရပါမည်။ ယင်းနောက် မိမိနံပါတ် ခေါ်သော အခါတွင် အလုပ်သမား ဘယ်နှစ်ယောက်ဟု တစ်ခါတည်းပြောပြီး ၊ ငါးယောက် ဖြစ်စေ ဆယ်ယောက်ဖြစ်စေ တစ်ခါတည်း ၀င်ရုံသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ပျူတာရှေ့တွင် လက်ဗွေ နှိပ်မည့် သူများမှ တစ်ယောက်ချင်းရှေ့နောက် တန်းစီ ထိုင်နေယုံသာဖြစ်သည်။ မိမိ ပါတ်စပို့စ် စာအုပ်ကိုလက်ဝယ် ကိုင်ထားပါ။ မိမိအလှည့်ရောက်လျှင် စာအုပ်ပေး၊ ငြိမ်ငြိမ် မတ်မတ်ထိုင်ရုံမျှသာ၊ (မိမိရှေ့ရှိ ကွန်ပျူတာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော ကင်မရာ အသေးစား (Web Camera ) ဖြင့် တာဝန်ကျသူမှ မှတ်တမ်းတင်ပါသည် ၊ ယင်းနောက် ဘယ်ဖက်လက်လေးချာင်း (လက်မ မပါ) စကင်န် ဖတ်စက်ပေါ်တင် ၊ အသံမြည်၊ ညာလက်ပြောင်း၊ ဘယ်ဖက်နှင့် ညာဖက် လက်မနှစ်ချောင်း တစ်ပြိုင်တည်းတင် ၊ အသံမြည်၊ စုစုပေါင်း သုံးမိနစ်လောက်မျှသာ ကြာပါသည် ၊ ငွေကြေးတစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးရန်မလိုပါ၊ “ လာဘ်ပေး ရန်မလို” စာတန်းများ မမြင်မိပါ။
ယခု ယာယီ ဖွင့်လှစ်ပေးထားသော မလေးရှား လ၀က ၏ လက်ဗွေနှိပ်ရန်ရုံးနေရာမှာ
Stadium Bolasepak Kuala Lumpur, Cheras
သူတစ်ပါး ထမင်းအိုးကို တုတ်ဖြင့်ထိုးရန် မရည်ရွယ်သလို၊ မကုန်ကျသင့်သည်ကို ကုန်ကျမည်ကိုလည်း မြန်မာအချင်းချင်း ရိုင်းပင်းသည့် သဘောဖြင့်သာ မျှဝေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ လွဲချော်မှုများ ရှိပါက နားလည်ပေးကြပါရန်။ သည်နေ့မှ ဖုန်းက ကျန်ခဲ့သဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ရန် အဆင်မပြေခဲ့သဖြင့် ဓါတ်ပုံများကို Google မှ ကူးယူထားပါသည်။
Posted by မိုးယံ at 11:52 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: မှတ်မှတ်ရရ, ရင်သို့ထိသော, ကြော်ငြာ
၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်ငံမှ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း လေးသောင်းခန့်အထိ မြင့်တက်
တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး ကံပေါက်မြို့ရှိ ရတနာ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းစင်တာ တစ်နေရာအား တွေ့ရစဉ်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြည်ပမှလာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း လေးသောင်းခန့်အထိ ရှိနေကြောင်းနှင့် လုပ်ငန်းပေါင်း ၄၅၄ မှ လာရောက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြန်ကြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းက သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသော သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ (၁/၂၀၁၁)တွင် ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥပဒေအရ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းပေါင်း ၈၀၇ ခု တွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော် အပါအ၀င် ကျပ်သန်းပေါင်း ၁၄၁၄ ဘီလျံထိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အလားတူပင် ပြည်ပကုန်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပါက ပို့ကုန် သွင်းကုန် စသည့် ပြည်ပကုန်သွယ်မှု လုပ်ငန်းအတွက် ပို့ကုန်သွင်းကုန် လိုင်စင်များကို အများဆုံးနှစ်ရက် အတွင်းရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေး လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် ဧပြီလမှ ဇူလိုင်လစတုတ္ထပတ်အထိကာလ အတွင်း စုစုပေါင်း ပြည်ပကုန် သွယ်မှုပမာဏ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၄၂၇ ဒသမ ၂၇ သန်းရှိခဲ့ပြီး ယခင် နှစ် အလားတူကာလထက် ၂၆ ဒသမ ၆၂ ရာခိုင်နှုန်း တိုးတက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
လတ်တလော အခြေအနေတွင်မူ ပြည်ပပို့ကုန် တိုးမြှင့်တင်ပို့နိုင်ရေး နှင့် လက်ရှိပေါ်ပေါက်နေသော ငွေမာနှင့် earning ဈေးနှုန်းကျဆင်းမှုများကြောင့် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ပို့ကုန်များအပေါ် ၀င်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင် နှုန်းနှင့် ကုန်သွယ်ခွန် ၈ ရာခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကောက်ခံ နေခဲ့ရာမှ ကုန်သွယ်ခွန်ကို ၃ ရာခိုင် နှုန်းလျှော့ချပြီး ၇ ရာခိုင်နှုန်းသာ ကောက်ခံခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည် ဟု သတင်းရရှိသည်။
“အရင်က ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၈ ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ ၀င်ငွေခွန် ၂ ရာ ခိုင်နှုန်း စုစုပေါင်း ၁၀ ရာခိုင်နှုန်း ကောက်ခံခဲ့တယ်။ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခွန်ကို အရင်ချပေးဖို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ တင်ပြခဲ့တာတွေရှိတယ်။ အဓိက ကတော့ အမေရိကန်ဒေါ်လာဈေး သိသိသာသာ ကျလာတော့ ပို့ကုန်သမားတွေ ထိခိုက်တယ်။ တချို့ လည်း သွင်းကုန်နဲ့ရော လုပ်ကြတယ်။ ပို့ကုန်သီးသန့်ဆိုရင် မခံနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ထဲမှာပဲ ကုန်သွယ် လုပ်ငန်းခွန်ကို ၈ ရာခိုင်နှုန်း မကောက်တော့ဘဲ ၅ ရာခိုင်နှုန်း လျှော့လိုက်တယ်။ စုစုပေါင်း ၇ ရာခိုင် နှုန်းပဲ ကောက်တယ်။ အခု ၅ ရာ ခိုင်နှုန်း ထပ်လျှော့တာဆိုတော့ ၀င်ငွေခွန် ၂ ရာခိုင်နှုန်းပဲ ပေးဆောင် ရမယ်။ ဒီလ သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ကစပြီး အကျုံးဝင်မယ်လို့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးကနေ စာထွက်တယ်လို့ သိရပါတယ်” ဟု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
“ပို့ကုန်အနေနဲ့တော့ အမြဲတမ်း တင်ပို့နေရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒေါ်လာဈေးကြောင့် မကိုက်တာ။ နောက်ပြီးတော့ အမေရိကန် ဒေါ်လာနဲ့ LC ဖွင့်လို့မရတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုရင် ယူရိုနဲ့ဖွင့်ရတယ်။ ငွေကြေးဖလှယ်တဲ့အတွက် ဆုံးရှုံးမှုကို ကိုယ့်နိုင်ငံက လုပ်ငန်းရှင်က ကျခံပေးရတယ်။ အခုလို အခွန်လျှော့ချ ပေးတာရော၊ လိုင်စင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖြေလျှော့ပေးတာကို ကြိုဆိုရမှာပါ”ဟု စီးပွားရေးပညာရှင် တစ်ဦးက သုံးသပ်သည်။
Posted by Unknown at 11:50 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတုတ္ထအကြိမ် ပင့်ဆောင်ကာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတို့တွင် အပူဇော်ခံမည်
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံရှိ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူရာ နေရာ
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတုတ္ထအကြိမ် ပင့်ဆောင်ကာ နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များတွင် အပူဇော်ခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ပင့်ဆောင်နိုင်ရေး ဦးစီးကော်မတီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် များအရ သိရှိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ကြွချီအပူဇော်ခံခဲ့သည်မှာ သုံးကြိမ် ရှိခဲ့ဖူးကြောင်း၊ ပထမအကြိမ်ကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် ပင့်ဆောင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး ရှစ်လကြာ အပူဇော်ခံခဲ့ ကြောင်း၊ ဒုတိယအကြိမ်ကို ၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် ပင့်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ၄၅ ရက်ကြာ အပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်း၊ တတိယအကြိမ်ကို ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင် ပင့်ဆောင်ပြီး ရက်ပေါင်း ၉၀ ကြာ အပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
ယခုတစ်ကြိမ်သည် စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် အပူဇော်ခံခြင်းဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်၌ ဥပ္ပါတသန္တိစေတီတော် လိုဏ်အတွင်းလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တွင် ကမ္ဘာအေးကုန်းမြေ မဟာပါသာဏလိုဏ် အတွင်းလည်းကောင်း၊ မန္တလေးတွင် မဟာ အတုလဝေယန် ကျောင်းတော်ကြီးအတွင်း၌ လည်းကောင်း အသီးသီးအပူဇော်ခံ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ထိုသို့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပင့်ဆောင်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် လုံခြုံရေးအာမခံပေးကာ စာချုပ်ချုပ်ဆို ပင့်ဆောင်ရသည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အပူဇော်ခံကာလ ပြည့်မြောက်သည့် အခါတွင် မန္တလေးမြို့မှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် မူလကိန်းဝပ် စံပယ်တော်မူရာ တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ဘေကျင်း မြို့ရှိ ကွမ်းဂျီးစု ဘုရားကျောင်းသို့ ပြန်လည် ပင့်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို ပင့်ဆောင်ရာ လမ်းတစ်လျှောက်နှင့် အပူဇော်ခံ ခေတ္တကိန်းဝပ် စံပယ်ရာ နေရာများတွင် အများပြည်သူများဖူး မြော်ကြည်ညိုနိုင်ရန် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံတွင် ကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသော ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော် ရန်ကုန်မြို့သို့ ၁၉၉၄ ခုနှစ်က
Posted by Unknown at 6:36 PM6comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: ဘာသာရေး, မြန်မာ သတင်း
ကျွန်တော် ကြိုက်၏ မကြိုက်၏
မပြောမပြီး မတီးမမြည်... ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ် ခပ်ဖွဖွ ထောင်းရဦးမှာပေါ့။ တဂ်ပို့စ်ဆိုတာတွေကလည်း ပါစင်နယ်လ်တွေ ငြိတာ အတော်များသားကိုး။ ဒါပေသိ ခင်မင်မှု အတိုင်းအတာ ချိန်စက်နိုင်သလို၊ အပြန်အလှန် မျှဝေမှုတွေ ထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှုတွေ နားလည်ပေးမှုတွေနဲ့ ရင်းနှီးဖော်ရွေမှုတွေကို မြင်ခွင့်ရတယ် လို့ ယုံကြည်မိပါ၏။ ဘလော့ဂ်မှာ စာမရေးဖြစ်တာ အတော်ကြာပါပြီ။ (အရင်ကလည်း ရေးတယ် မဟုတ်လှပါဘူး) အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော်မူကား အကျွန်ုပ်သည် ပြောချင်သည်ကများလှပြီး စာလုံးအဖြစ် ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့် တစ်သွယ်၊ ပြောချင်သည်က တောင်ရောက်မြောက်ရောက် ဖြစ်တတ်သည်ကားတစ်ဖုံ ၊ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူမှာ အချိန်ပေးရ၏ ။ ဆရာအောင်သင်း ပြောသလို “ အချိန်သည် အသက်၊ အသက်ဆိုတာ အချိန်ကိုခေါ်တာ ” ဒါကြောင့် ကိုယ့်စာလာဖတ်လို့ သူ့အချိန်တွေ အကျိုးမဲ့ဖြစ်ကုန်ပြီး အသက်တွေ အကျိုးမဲ့ ရှည်သွားခြင်းသည် သေခြင်းနားသို့ နီးကပ်သွားခြင်းပေတည်း။သို့ဆိုသော် အကျွန်ုပ်သည် မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ကို ကိုယ်ထိလက်ရောက် မသတ်သော်ကား ၊ အချိန်ကို စားသော အဖျင်းစာများဖြင့် အသင့်အသက်ကို ခိုးယူသလို မပြေးသော် ကံရာရှိမှာကိုကား အကျွန်ုပ်သည် အလွန်အမင်း စိုးရိမ်စိတ် ထားမိ၏။ “ အကျင့်ဆိုးကတော့ အဲဒါပါပဲ ဗျာ ”လိုရင်းမရောက် အချိန်ပျောက်အောင် လေကြောရှည်တဲ့ မောင်မိုးယံ လေ.။
ကဲ...ဘလော့ဂ်တစ်ခွင် ကျင်လည်နေသမျှ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရေးနေဦးမယ့် တဂ်ပို့စ်များကို စလုံးရေး စလိုက်ရအောင်။
ကိုယ်ခန္ဓာဆိုတာလည်း တစ်တယ်တော့ စစ်မှန်သော တရားသဘောနဲ့ သစ္စာဆိုက်အောင် ကြည့်ရင် ဘာမှကိုယ်လည်း မဟုတ် ခန္ဓာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ ဓမ္မခန္ဓာတို့ ရူပက္ခန္ဓာ တို့တော့ ကြားဖူးသား။ ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း ရှစ်သောင်းလေးထောင်ကို နှံ့စပ်သူ မဟုတ်တော့လည်း တရားသဘောတွေကို ကံသေကံမ ပြောရဲသည်မရှိပါဘူး။ နာမ်နဲ့ရုပ် တရားနှစ်ပါးသာ ရှိသော်လည်း သုံးဆယ့်နှစ်ကောဌာသ ဆိုသော ရုပ်အဖွဲ့အစည်းကြီးကိုသာ အကျွန်ုပ်တို့သည် ဥာဏ်ကန်းသော မျက်စိဖြင့် သူ့ကိုယ် ငါ့ခန္ဓာ စသည်ဖြင့် အရှက်မရှိ အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေမိကြ တတ်သည်။ ထိုထို သော အရိယာမဖြစ်သေးသော သူငါ အများထဲတွင် အ၀ိဇ္ဇာအတိ ဖုံးသော မောင်မိုးယံ ငတုံးသည်ကား အဆိုးတကာ့ အဆိုးဆုံးဖြစ်ပေတော့သည်။ အဘယ်နည်း ဟူမူကား အကျွန်ုသည် ဣိထ္တိယ (ရွှေရတုမှတ်တမ်း ကိုကြီးကျောက်ပြောသော အိပ်ရင် ထိလို့ရတဲ့) မိန်းမမျိုးကို ရုပ်ခန္ဓာချင်း တူပါလျက် ၊ အနိမ့်အမြင့် အပိန်အ၀ အဖြူ အမဲ၊ ခြောက်ပြစ်ကင်းသည်လော သုံးသပ်သေးသည်။ အချိုးအစားကို ခေါ်တော ငါးသိန်းအားဖြင့် အာသာငမ်းငမ်း ရှုမှတ်သေးသည်။ ဤသို့ ခန္ဓာ မျိုးစုံ အဖုံဖုံကို မစားရ၀ခမန်း သုံးသပ်စောကြာပြီးမှ ငါးရံ့ကိုယ်လုံး သမင်မျက်လုံး ပိတုန်းရောင် ကေသာ ဇင်ယော်တောင် မျက်ခုံး ဆင်နှာမောင်းပေါင် နှင့် တိရစ္ဆာန်မကျ လူမကသော ကိုယ်ခန္ဓာမျိုးကို နှစ်သက်တတ်၏။ ဖြူစင် ပ၀င်း ပြစ်မျိုးမှဲ့မထင် မျက်နှာ လမင်းအား နှစ်သက်၏။ ပွေး ညှင်း ၀ဲကင်း ဖြူဖြူဝင်းသော ခြေသလုံးမျိုးကား ကြိုက်၏။ တစ်ခါက ကြိုက်ခဲ့ဖူးသော ၃၄ ၂၇ ၃၈ များလည်း ကြိုက်နှစ်သက်ပါသေး၏။ ကြိုက်တာတွေချည်း စွတ်ပြောလို့ ဒီကောင့်ကို ဘာကောင်လည်း ခန့်မှန်းမိကြပြီ ဆိုမှဖြင့်အခက်။ မကြိုက်တာတွေ လှည့်ပြောပြီး အာရုံပြောင်းလိုက်တာ ကောင်းပါသည်လေ။
အရပ်ပု ခေါင်းရှည် နှမ်းခမ်းထော် မျက်လုံးစွေ နဖူးမောက် ပေါင်ကွ လိပ်ခါး ဖားဖင် များအား အကျွန်ုပ်သည် နှစ်သက်ခြင်းအလျဉ်းမရှိပါချေ။ခြေဖမိုးတွင် ခြင်ကိုက်၊ခြေသလုံးတွင် အစက်အပျောက်များပြီး အကွက်ထနေသော ပေါင်တံညို ညစ်ညစ်များမြင်မိပြီ ဆိုလျှင်ဖြင့် ထိုနေ့၌ အကျွန်ုပ်သည် ထမင်းအစားထိုး ကြက်ကြော်များကိုသာ စားသုံးတတ်၏။
တစ်ခါတစ်ရံ ၀ါသနာများသည် အပြုအမူဖြစ်နေတတ်သည်။ ၀ါသနာ ဆိုသည်ကလည်း ရဟန္တာမဖြစ်မခြင်း ပယ်ရခက်လိုက်သည် ဖြစ်ခြင်းဟု ကြားနာမှတ်သားဖူးပါ၏။ သို့ပေသိ အကြင်အချင်းအရာသည် အကျွန်ုပ်တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လွန်စွာ အလှမ်းကွာလွန်းပေသည်။ ယခုမူကား အကျွနုပ်နှစ်သက်သော မနှစ်သက်သော အကျင့်အပြုအမူ များကိုသာ ဖော်ပြရန် ဖြစ်သောကြောင့် အလကားရသော လေဖြင့် ပရမ်းပတာ နိုင်လှသော နှုတ်ကို စောင့်စည်းခြင်းဖြစ်ရန် လမ်းကြောင့်အမှန် ပြန်လှည့်ချေမည်။ လူဆိုတာ မျိုးကလည်း ကိုယ်သာအမှန် ထင်မှတ်စွဲသန် သူများဖြစ်သောကြောင့် အကျွန်ုပ်သည်လည်း အကျွန်ုပ်၏ ကောင်းမြတ်သော အမူအကျင့်ကလေးများကို ပြောပြလေအံ့။ အကျွန်ုပ်သည် လူလိမ္မာသား ယဉ်ပါးခြင်းဖြစ်၍ အပြုအမူကောင်းများ ရှိလေ၏။ အစားအသောက်စားရာတွင် ညှင်သာစွာ စားတတ်၏။ အသံ သိုအောင် စားတတ်၏။ မိန်းမရွှင်တို့ ကျင့်အပ်သော အမှုဖြင့် လူတစ်ကာအား သွားဖြီးသော အမှုကို ရှောင်ကျဉ်၏။ အရှက်လုံရန်နှင့် အပူအအေးမျှတရန် ရည်ရွယ်သော အ၀တ်အား ယဉ်ကျေးစွာ ၀တ်ဆင်၏။ဆံနွယ်နက်ကို ခါးအထက်တွင် အဖျားကော့ကာ ယိမ်းနွဲ့နေသော မိန်းမပျိုးမျိုးအား အာသာငမ်းငမ်းရှိတတ်၏ (ဆံပင်တွေ ဈေးကောင်းတာ ခင်ဗျားလဲသိလျက်နဲ့ဗျာ) “မကြိုက်တာကတော့ အများသားဗျ ” လောကကြီးကို အကောင်းမြင်စိတ် မရှိသည်နှင့်လည်း တိုက်ရိုက် အချိုးကျ သက်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။ မိန်းမတို့ ဘုန်း ဆံတုံးဟု ဆိုသော်ငြား ပြတိုက်ဝင် ဆင်ယင် ထုံးဖွဲ့မှုကို ရှောင်ကျဉ်း၍ ပိတုန်းရောင်ကေသာကြော့ကို အကြောင်း မသင့်သည့်တိုင် စာကလေးသိုက် ပမာ ရှုပ်ပွနေရှာသော အကြေကောက် ငှက်သိုက် ဆံနွယ်များကို မနှစ်သက်၊ ဓါးထိသလို နှုတ်ခမ်း အရောင်ကို အနာဖေးကွာသလို အညိုရောင် လိုင်နာဆွဲသော နှုတ်ခမ်းများအား ဖနောင့်ဖြင့် ကျပ်ကျပ်ပေါက်ချင်မိသည်။ အိနြေ္ဒ နှင့် သိပ်ခါ ..အဲ အဲ. .သိက္ခာကို ထီမထင်သော ပေါင်နှစ်ခြမ်းအား ဖြဲလိုက်ကားလိုက် ပြုမူပြီး ထိုင်တတ်သော မိန်းမ မျိုးအား လေးဂွဖြင့် ပစ်ချင်မိ၏။
အစားအသောက်၌လည်း အကျွန်ုပ်သည် ဇီဇာကြောင်မိသေး၏။ အရွက်၌ စာရွက်ကို မစား ၊ အသား၌ သစ်သား ရှောင်၏၊ အသီး၌ ဂေါက်သီး မစား၊ ၀က်သားအားခေါင်းမှ အမြီးတိုင် မြိန်ရှက်စွာ စားသောက်တတ်၏။ ရေထဲမှ ငါးကိုကား ဒိုက်နံ့ မနံရပါက အကုန်စား၏။ အရွက်ဆိုလျှင်လည်း လက်ဖက်အသားကို စောင်းလျားသီး ငရုတ်သီး ကြက်သွန်ဖြူတို့ နှင့် ရောထောင်းထားသော ချဉ်စပ်လက်ဖက် များကို ယောက်ျားလေးပီပီ ကြိုက်နှစ်သက်၏။ အသက်ရှင်ဖို့ စားသောက်နေသော အကျွန်ုပ်သည် စားသောက်ဖို့ အသက်ရှင်နေသည် မဟုတ်သောကြောင့် ကွမ်းယာကို ဇာတိမာန်မပျက် တရစပ်ဝါးနေသော်လည်း ဖရဲသီအား အလွန်အမင်း မြင်ပြင်းကပ်၏။ ပဒိုင်းသီးအား ရူးလျှင်တောင် ကျွန်ုပ်စားလိမ့်မည် မဟုတ်။ စက်မှုစွမ်းအား ခေတ်ကျော်လွှားသည့်တိုင် နွားနှင့်ဖက်ရုန်းနေရသော အကျွန်ုပ်တို့ လို တောသူတောင်သားများအဖို့ သားသမီးပမာ နွားရတနာကို အဘယ်နည်းကြောင့် စားဝင်အံ့နည်း။
အရိုးပေါ်အရွက်မဖုံးစေဖို့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ ဘယ်လောက်ပဲ နှီးနှောပါဝင်နေပါတယ်ပြောပြော အိန္ဒိယမှ ဆင်းသက်လာသော လုံချည်ကို မြတ်နိုး၏။ အရောင်များနှင့် အ၀တ်အစားတို့သည် လူ့စိတ်ကို ထင်ဟပ်စေ ပြောင်းလဲစေသည်ကို ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းကြားဖူးသော အကျွန်ုပ်သည် လည်ကတုံး လက်ရှည် အဖြူရောင် လေးများကို နှစ်သက်မက်မောစွာ ၀တ်ဆင်တတ်သည်။အောကတ္တီပါ ဖိနပ်ကို ပိုးသားဖြင့် ချုပ်လုပ်ထားသော အပြာရောင် ၊ အစိမ်းရောင် များကို နှစ်သက်၏။ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးသော တီရှပ်အင်္ကျီများကို နှစ်သက်သလို ဦးထုပ်ကို မချွတ်တမ်းဆောင်းတတ်၏။ အဘယ့်ကြောင့် ဆိုသော်ကား အကျွန်ုပ်၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အတွေးအခေါ်များအား ဦးနှောက်ယိုစီးမှု မဖြစ်နိုင်ရန် ဦးထုပ်ဖြင့် ကာရံထားသည့် သဘောပင်တည်း။ သို့ပေမင့် မည်မျှလောက်ပင် မြန်မာဆန်သည်၊ ဇာတိမာန် ရှိတယ်ပြောပြော ဂုတ်သွေးစုတ်ကာ သစ်ပင်တွေကို အမြစ်က နှုတ်ပြီး ကျုပ်တို့သွေးကြော ဧရာဝတီကိုကောအောင် လူမဆန်သည့် ပေါက်ဖော်ကြီးတို့ ယဉ်ကျေးမှုမှ ဆင်းသက်သော တိုက်ပုံ အိင်္ကျီကိုတော့ဖြင့် ပွဲလမ်းသဘင်ရှိတောင် မ၀တ်ဆင်ပါ။ အလုပ်ကြမ်းသမားများ စတင် ၀တ်ဆင်ခဲ့သည့် ဂျင်းန် ဘောင်းဘီများကိုကား အကျွန်ုပ်သည် လွန်စွာ မုန်းတီး၏။အနုများနှင့် မသန်စွမ်းသူများ ၀တ်ဆင်လေ့ ရှိသော ကြိုးသိုင်းနှင့် ကွင်းထိုးဖိနပ်များအား အကျွန်ုပ်သည် လွန်စွာကျဉ်၏။
နိဂျုံးခုတ်အနေဖြင့် တင်ပြရသော်..အဲ... ဖော်ပြရသော်..အာ...ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒီလိုဗျာ... ရေးပြရရင်ပေါ့..။ အထက်ပါ အကြောင်းအရာတို့သည် ကျွန်ုပ်၏ ငယ်ပေါင်းကြီးဖေါ်မဟုတ်သလို တရုတ်သိုင်းကားများထဲကလို သွေးသောက်ညီအစ်ကို မဟုတ်သော အွန်လိုင်းမှ ခင်မင်ရသော သူငယ်ချင်းအစ်ကိုကြီး ကညိမ်းနိုင်(မျောလွင့်တိမ်တို့နားခိုရာ) ၏ ကျွန်တော့်အပေါ် တခုတ်တရ ရှိလှသော ခင်မင်မှုအား လေးစားသော အားဖြင့် ပျော်စေရယ်စေ သဘောမျိုးသာရေးသာဖြင်းဖြစ်သောကြောင့် အဟုတ်အမှန် ယူဆကာ အမုန်းမာန် မပွားကြပါစေလိုပါ၊ ကိုကြီးဇော်ရဲ့ စကားကို ငှားပြော ရလျှင်ဖြင့် “စာရေးသူနှင့် ရေးသည့်စာကို မရောထွေးမိပါစေနှင့်” လို့ ပြောကြားရင်း မဖြစ်ညစ်ကျယ် ဦးနှောက်ကို ပရမ်းပတာ အရေးအသားဖြင့် ပျော်ရွှင်စေရန် စိတ်အရင်းခံ၍ ကျီစယ်အမှု ပြုမိပါသည်။
Posted by မိုးယံ at 12:01 AM 13 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
လိုတရ အိုးလေး တဲ့ဗျာ
လိုတရအိုးလေးနဲ့ မိတ်ဆက်ခွင့်ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ဗျာ ။ ဒါလေးက ကျွန်တော် ရှာတွေ့ထားတဲ့ အရာလေးတွေထဲက တစ်ခုဗျာ ။ ဟီး နာမည်က လိုတရအိုးဆိုတော့ နှစ်လုံးထီတော့ မတောင်းပါနဲ့နော် ။ တန်းခိုးတွေ ကွယ်ကုန်မှာ စိုးလို့ ။ ဆက်ပြောကြည့်မယ်....အဲဒီကောင်လေးကို မိမိစိတ်ကူးထဲမှာ ရှိတာလေးကိုမေးကြည့်လို့ရတယ် ။မိမိစိတ်ကူးရှိရင် ရှိသလောက် မေးတတ်ဖို့လိုမယ် ။ ရှင်းရှင်းဖြစ်ဖို့တော့ လိုမယ် ။ မြန်မာလိုဆိုလိုလည်း မိုက်ပါတယ် ။ မိမိစိတ်ကူးထဲက ရှိတဲ့ စကားလုံးကို ရိုက်ပြီးတော့ ရှာခိုင်းကြည့်လို့ရတယ် ။ အဓိက တစ်ခုတော့ သူပြောပြမယ် ။ ကျန်တာတွေအတွက်တော့ သိမ်းကြုံးပြီးတော့ ပြောပြလိမ့်မယ် ။ ကျွန်တော်ကတောင် လန်ဒန် မိုးလေဝသ သတင်းကို မေးလိုက်သေးတယ် ။
ထိုင်းကိုမေးတော့ မရဘူး ဟီး ။ ထိုင်းစကားတော့ တတ်ပုံမရဘူး ။ မြန်မာလိုတော့ မွေလို့ရတယ် ။ ကျွန်တော်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း www.decembermgmg.co.cc ကို ရိုက်ထည့်လိုက်တာ ။ ဒီလိုလေးပေါ်လာတယ်ဗျာ ။
အဲဒါလေးကို သူက ပြန်ပြောပြတယ်။ ကျန်တာတွေကိုတော့ သူအကျဉ်းချုံးပြီးတော့ ပြောပြပါတယ် ။ http://m.google.com/u/A_b8NM ဆိုပြီးတော့ အဲဒီစာလေးကို နိပ်လိုက်တာနဲ့ Google မှာ www.decembermgmg.co.cc ရှာရိုက်သလိုပဲ တက်လာတယ် ။ အံဖွယ်လေးပဲ ။ စာဖတ်သူတို့လည်း သဘောကျမယ် ထင်ပါတယ် ။ သဘောကျတယ် ဆိုရင်တော့ Add လိုက်ပါ ။ khunpan258@gmail.com အဲမှားလို့ တမင်သက်သက်ကိုမှားတာ ဟီး ။ guru@googlelabs.comပါ ။ အက်လိုက်တာနဲ့ တစ်ခါတည်း တန်း မီးစိမ်းနေပါလိမ့်မယ် ။ အားကျမခံနဲ့ တစ်ခါတန်းပီး မေးပစ်လိုက် ။ ရင်ထဲက စကားလုံးတွေကိုပေါ့ ။ ကျွန်တော်လိုမျိုး ထိုင်းမှာနေပြီါ်တော့ လန်ဒန်မိုးလေဝသကိုတော့ မမေးပါနဲ့နော် :D
အားလုံးကို လေးစားတဲ့ ခွန်မောင်ပန်http://www.decembermgmg.co.cc/
ကိုခွန်မောင်ပန် ကို အားကျပြီး မိုးယံတို့ မေးပုံကို လဲကြည့်ဦး .........
guru is online.
မိုး: how are u moe yu san?
guru: Did you mean 'web how are u moe yu san?'?
* Moe Yu San | Facebook
Moe Yu San - hello All My friend,Welcome to my fans page.I promise you that I try my best on the Actress.Thank you :) - Description: i amamodel and ...
View all results:
မိုး: temperature of kulalumpur
guru: Did you mean 'web temperature of KUALA LUMPUR'?
* Kuala Lumpur, Malaysia Forecast : Weather Underground
Updated 11:30 AM MYT. Weather Station. Kuala Lumpur (WMKK). Elevation. 72 ft. Station Select. Now. Mostly Cloudy. Temperature. 86 °F ...
မိုး: exchange rate RMB to US
guru: Did you mean 'web exchange rate RMB to US'?
* Exchange Rates Graph (American Dollar, Chinese Yuan) - 120 days ...
ViewaCurrency Exchange Rate Graph for American Dollar, U.S.A. vs Chinese Yuan. This currency graph will show you your currency pair's previous ...
မိုး: what is the god?
guru: Did you mean 'web what is the god?'?
* The God Particle: If the Universe Is the Answer, What Is the ...
The God Particle: If the Universe Is the Answer, What is the Question? isa1993 popular science book by Nobel Prize-winning physicist Leon M. Lederman and ...
Sent at 1:18 PM on Friday
guru: Did you mean 'web လူသားအားလုံးအတွက်'?
* Chann Chann (channapril) on Twitter
လူသားအားလုံးအတွက်: အဂန်း အဂန်း ၊ အဂန်း အန် အဂန်း http://t.co/nCpgszV 3:01 AM Oct 27th, 2010 via Tweet Button ...
နောက်ထပ် ကျွန်တော် မေးထားတဲ့ ပေါက်ကရတွေပါဆို ရှုပ်ကုန်ဦးမယ်.. ကဲ အလိုရှိက add လိုက်ကြပါခင်ဗျ။
Posted by မိုးယံ at 1:22 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: နည်းပညာ, ဗြုတ်စဗျင်းတောင်း
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, August လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, August လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ်း ...
ဒီလတွင်း စိတ်ညစ်လိုက် စိတ်ပျော်လိုက် ဖြစ်နေမည်။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများနဲ့ ပက်သက်၍ အဆင်ပြေလိုက် မပြေလိုက်နဲ့ ဖြစ်နေမည်။ အလုပ်တွင် နေရာရကိန်း ရာထူးတိုးကိန်း ရှိပါသည်။ အထက်လူကြီးနဲ့ စကားအပြော အဆိုများ အဆင်ပြေလာမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ကုန်ကျမှု များနေမည်။ မိသားစု ကိစ္စများ ၊ သူငယ်ချင်းများ မိတ်ဆွေများ အတွက်နဲ့ ငွေကုန်ကျမှုများ ရှိပါသည်။ ငွေရေးကြေးရေး အဆင်ပြေလာမည်။ စက်ပစ္စည်းဝင်မည်။ ယာယီခရီးထွက်ရမည်။ သူငယ်ချင်းများနဲ့ ပြန်လည် ဆုံတွေ့ရမည်။
ပညာရေး တိုးတက် နေသော အချိန်ကာလလေးပါ။ ဆက်လက်ကြိုးစားပေးပါ။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ချစ်သူနဲ့ နီးရက်နဲ့ ဝေးနေသလို ဖြစ်နေမည်။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာယာ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွက် ကျန်းမာရေးမှာ သွေးထွက်သံယို ကိစ္စများ ၊ ထိမိခိုက်မိမှုများ လက်များ ခြေထောက်များတွင် မကြာခဏ ဖြစ်မည်။ စိတ်ပူစရာ မရှိပါ။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် စာအုပ်တစ်အုပ်ထဲတွင် ငွေ ၅ ကျပ်ထည့်လိုက်ပြီး မိမိနေအိမ် ရှိစားပွဲ တစ်နေရာရာတွင် တင်ထားလိုက်ပါ။ ကံကောင်းလာမည်။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။55 8 8
ဒီလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ ပြန်လည် အဆင်ပြေလာမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ အနည်းငယ် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေမည်။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်များ ယခု အချိန်တွင် ထပ်မံတိုးချဲ့ရန်အတွက် အဆင်မပြေသေးပါ။
ငွေကြေးကိစ္စများ စီးပွားရေးများ အဆင်ပြေလာမည်။ စမ်တူ လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရမည်။ နေရာကောင်းရမည်။ အိမ်ပြောင်းရမည် ပြင်ဆင်ရမည်။ ဘာသာရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ရမည်။
ပညာရေး ကြိုးစားနေရသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။
ယခု အချစ်ရေးကိစ္စများ ချစ်သူနဲ့ဝေးကွာနေရသူများ ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရမည်။ အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးပါ။
ယခုလ အတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ စိတ်ပင်ပန်း ၊ ကိုယ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် တနင်္လာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် လက်ကိုင်ပဝါတစ်ထည်ကို ရေမျှော၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလ အတွက် ကံကောင်း အကျိုးပေး သောဂဏန်းများ ။ ။5805
ယခုလ အတွင်း စိတ်ပင်ပန်း ၊ ကိုယ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေမည်။ အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ အလုပ်ကိစ္စများထက် လူမှုရေး ကိစ္စများနေမည်။ သူတစ်ပါး ကိစ္စများတွက် မိမိ ပါဝင်နေရမည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ ရလိုက် ကုန်လိုက် ဖြစ်နေပြီး လူမှုရေး ကိစ္စများ အတွက်နဲ့ ငွေအကုန်အကျ များနေမည်။ မိသားစုအတွင်း စီးပွားရေး တိုးတက်လာမည်။ အင်္ဂါနံ ပစ္စည်းများ ဝင်မည်။
ပညာရေး ကြိုးစားနေမည့် အချိန်လေးပါ။ ကူညီသင်ပြပေးသူ ပေါ်မည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူနဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေရသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ အဆင်ပြေလာမည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများမှာ ရန်စကားများနေရသော အချိန်လေးပါ။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ဗိုက်နာ ၊ ဗိုက်အောင့် ဖြစ်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက အင်္ဂါနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ပန်းအဖြူရောင် ၉ ပွင့်ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ဂဏန်းများမှာ ။ ။2506
ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်ကိစ္စများ ကောင်းမွန် အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ကိစ္စများတွင် အခုလက်ရှိ ကံကောင်း အဆင်ပြေနေမည်။ အထက်လူကြီးနဲ့ စကားပြောဆိုများ အဆင်ပြေပါသည်။
ငွေကြေးကိစ္စများ ယခုလအတွင်း ကံကောင်းလာမည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ရမည်။ငွေဝင်မည်။ အများကြီး မဟုတ်ပါ။ ပုံမှန်ဝင်မည်။ မိသားစုဝင်များ နှင့် ခဏတာ ခွဲခွာနေရမည်။ စနေနဲ့ ပစ္စည်းများဝင်မည်။ သောကြာနံများ ဝင်ပါက မကောင်းပါ။
ပညာရေး သင့်တင့် ရှိပါသည်။ ဆက်လက် ကြိုးစားပါ။
အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။ စိတ်ဆိုးနေ စိတ်ကောက်နေ တုန်းပါပဲ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နေမည်။
ယခုလ ကျန်းမာရေးမှာ ခါးနာ ၊ ခြေထောက်နာ ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ဗုဒ္ဓ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ကလေးတစ်ယောက် အား သကြားလုံး ၁၇ လုံး လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။5544
ဒီလ အတွင်းမှာ အဆင်မပြေသေးပါ။ အလုပ်အကိုင်များ နေရာများ ပြောင်းရွှေ့ရမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်မှု ရှိနေသော်လည်း အဆင်ပြေလာမည်။ အကူအညီပေးသူ အကြံညဏ်ပေးသူများ ပေါ်လာမည်။ အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေလာမည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်မပြေသေးပါ။ ကြွေးတင်မည်။ ရသလောက် ကုန်နေပြီး ဝင်သလောက်ထွက်နေမည်။ သင့်တင့်မျှသာ ငွေဝင်မည်။ သူတစ်ပါးကိစ္စများ အတွက်နဲ့ စိတ်ညစ်နေမည်။ ခရီးယာယီ ထွက်ရမည်။ စက်ပစ္စည်းများ ပျက်မည်။
ပညာရေး ကိစ္စများ ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးပါ။ သင်တန်းများ ဆက်တက်ရမည်။
ဒီလအတွင်း အချစ်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော်လည်း မကြခဏ စိတ်ညစ်မှုများ ဝင်ရောက်လာမည်။ ချစ်သူနှစ်ဦး ဆုံဆည်းရမည်။ ဒီလအတွင်း အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများ အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ဖက် ကျန်းမာရေးညံ့မည်။
ဒီလအတွင်း စိတ်ပင်ပန်း ၊ ကိုယ်ပင်ပန်း ဖြစ်နေမည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် ကြာသပတေးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် မိမိနှစ်သက်ရာ သစ်သီး ၅ မျိုးကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်းများမှာ ။ ။4055
ယခုလအတွင်း အလုပ်အကိုင်များ အဆင်ပြေလာမည်။ အလုပ်ကိစ္စများ နေထိုင်မှုကိစ္စများ ပြသနာများကို ဖြေရှင်းနေရမည်။ အလုပ်ထဲတွင် စကားပြောဆိုမှု အဆင်မပြေသော်လည်း စိတ်ပူစရာ မရှိပါ။ အကူအညီပေးသူ ပေါ်မည်။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေး ကိစ္စများ ကံကောင်းနေသော အချိန်လေးဖြစ်ပါသည်။ မိမိကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးများ သာမက သူတစ်ပါး ငွေကြေးများပါ ဝင်လာမည်။ ရသလောက် ကုန်ကျမှု များရှိနေမည်။
ခရီးကိစ္စများ သွားလာမှု အဆင်ပြေပါသည်။ ပညာရေးကိစ္စများ ကြိုးစားနေရမည်။ ပညာရေး ကံကောင်းပါသည်။
အချစ်ရေး ကိစ္စများ နီးရက်နဲ့ ဝေးနေသလို ခံစားနေရမည်။ မိမိ နှင့် မိမိ ချစ်သူအကြား ပြသာနာမရှိပေမဲ့ သူတစ်ပါးကိစ္စများ အတွက်နဲ့ ပြသာနာ ဖြစ်နေမည်။အဆင်ပြေပါသည်။ အိမ်ထောင်ရေး ကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နေရမည်။
ဒီလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ ဦးခေါင်းပိုင်း ၊ ကျန်းမာရေးညံ့မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် သောကြာနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် အုန်းညွှန့် ၁၂ ညွန့်ကို မိမိနေအိမ် ဘုရားတွင် လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသောဂဏန်း ။ ။978 2
ယခုလ အတွင်းမှာ အလုပ်ကိစ္စများ အဆင်ပြေနေသော်လည်း အလုပ်ထဲတွင် စိတ်ညစ်မှု အနည်းငယ် ရှိနေမည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် များနှင့် စကားပြောဆိုမှု ကိစ္စများ အဆင်မပြေပါ။
ယခုလအတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ အဆင်ပြေနေမည်။ ဝင်ငွေ များသလို ထွက်ငွေလည်း များနေမည်။ ငွေစုမိမည်။ လက်ဆောင်ပစ္စည်းဝင်မည်။ စက်စ္စည်း ဝင်မည်။ ထီကံစမ်းပါ။ ခရီးယာယီများ မကြာခဏ ထွက်ရမည်။ နေရာတိုင်းလိုလို စိတ်တိုင်းမကျပဲ စိတ်တိုနေမည်။ ဘာသာရေးကိစ္စများ ပြုလုပ်ရမည်။
အချစ်ရေးမှာ အဆင်ပြေနေသော အချိန်လေးပါ။ ဒီလအတွင်း အချစ်ရေး စန်းပွင့်နေသော အချိန်လေး ဖြစ်ပါသည်။ ယခုလ အိမ်ထောင်ရေးကိစ္စများမှာ တကျက်ကျက် နဲ့ စကားများနေရသော နေ့ရက်တွေများနေမည်။
အခုလအတွင်း ကျန်းမာရေးမှာ မျက်စိအားနည်းမည်။ ဗိုက်အောင့်မည်။
ယတြာ = ကံကောင်းစေရန်အတွက် စနေနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၄၅ မီနစ်တွင် ကလေးတစ်ယောက်အား ငွေ ၁၀ လှူုဒါန်း၍ ဆုတောင်းလိုက်ပါ။
ဒီလအတွက် အကျိုးပေးသော ကံကောင်းသော ဂဏန်းများ ။ ။ 179 0
2011, August လ တွင် မိမိရဲ့ဘဝလေး များလည်း (၁၁) မီးငြိမ်း၍ အေးချမ်းပါစေ။ ဆက်သွယ်ရန် ...ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ၏ တပည့် - ဆရာမျိုးဟန်ကို - NO. 314 , Block P/B , Jin Cheras Taman Cheras ,56100 Kuala Lumpur Malaysia - http://www.myohanko.br.ms - myohankonew@gmail.com - Ph; 016 , 606 1917 , 017, 226 0715 - စေတနာ မှန်၍ စိတ်ကောင်း ထားတတ် သူတိုင်း ကံကောင်း ကြပါစေ။
Source by :http://www.myohanko.br.ms/
Posted by Unknown at 9:22 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
လူ နှင့် ဖေ့စ်ဘုတ်
တစ်ချို့လူတွေက ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက် လို သဘောထားကြတယ်။ ပုံလေးတွေတင်၊ ကိုယ်ကြိုက်တာလေးတွေရှာတင်၊ သီချင်းလေးတွေတင်၊ ဘယ်သူ like like, မ like like၊ ကိုယ် like တယ်။ ကိုယ်တင်ထားတာလေးပြန်ပြန်ကြည့်ေ
နရတာ အမော။ ဘယ်သူမှ လာ မlike ရင်၊ ကိုယ်ဟာကို ပြန် like ထာ...းတတ်သေးတာ။ တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဧည့်ခန်းကရှိုးကေ့စ် လိုသဘောထားတယ်။ ရှိုးကေ့စ်ဆိုတာ ရှိတာလေးတွေ စီစီရီရီတင်ပြီးကြွားတဲ့နေရာမဟုတ်လား။ ဘွဲ့ယူ၊ မင်္ဂလာဆောင်၊ အိမ်ဝယ်၊ ကားဝယ်၊ ဂါဝန်အသစ်ဝယ်၊ ဘောင်ဘီဖင်ကျပ်ဝယ်၊ ဖိနပ်သစ်ဝယ်၊ ခရစ်ဒက်ကဒ်ရ၊ သိသိသာသာ တစ်မျိုး၊ မသိမသာတစ်ဖုံ၊ နည်းစုံတယ်နော..။ (ငါ့တော့ သောက်ညင်ကပ်နေကြလောက်ပြီ.. ဟိ..ဟိ..။) တစ်ချို့ကျပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အိမ်သာ လိုသဘောထားကြတယ်။ အိမ်သာကို လူတွေက ပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ လိုနေချိန်ကြမှသာ အပြေးအလွှားလာကြတာလေ။
ကျန်တဲ့အချိန်ကျတော့ မနေအပ်တဲ့ အရပ်လိုလို ကျဉ်ချင်ကြတာကလား။ ခုလည်း အဲသလိုပါပဲ။ လူပျို၊ အပျိုဘဝမှာတော့ ရည်းစားရှာချင်တော့ နေ့ရော ညရော ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်။ ရည်းစားလည်းရရော ဖေ့စ်ဘုတ်ကိုအဖက်မလုပ်တော့ဘူး။ အဲ… အိမ်ထောင်ပြုလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှ ဖေ့စ်ဘုတ်ဖြစ်ပြန်ရော..။ မဟုတ်ရင် မင်္ဂလာဆောင်ပုံတွေ တစ်အိမ်တက်ဆင်းလိုက်ပြနေရမှာပေါ့..။ အဲ.. မင်္ဂလာဆောင်ပြီး သွေးအေးသွားပြန်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခမျာ ချောင်ထိုးခံရပြန်ရော။ စောင့်ပေတော့ ကလေးရတဲ့အထိ။ အဲ.. ကလေးရပြီဆိုလို့ကတော့ ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ပြန်ရောက်လာကြပြန်ပါရောမဟုတ်လား..။
ဖေ့စ်ဘုတ်ဘဝ သင်္ခါရပေါ့လေ။ တစ်ချို့တွေအတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လိုပဲဖြစ်နေပြန်တယ်။ ယောက္ခမများ မတော်မဖြစ်လို့တော်ရပေမယ့် တော်ယုံတော့ ပတ်ပတ်သက်သက်မလုပ်ကြတဲ့သဘောမဟုတ်လား။ အဲလိုပဲပေါ့။ အကောင့်တော့ သူများဖွင့် ကိုယ်ဖွင့် ဖွင့်ကြပြီး၊ တစ်လနေလို့လည်း တစ်ခါအလည်မလာ၊ လာပြန်တော့လည်း ဖင်ပူအောင်မနေကြတဲ့သူတွေပေါ့။ သူတို့အတွက် ဖေ့စ်ဘုတ်က ယောက္ခမအိမ် လေ။ အဲ… တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ဘော့စ်(Boss) လိုသဘောထားကြပြန်ပါသေးတယ်။ ဒီနေ့ ဘယ်သွားတယ်၊ ဘာစားတယ်၊ ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်၊ ဘယ်နေရာရောက်နေတယ်ဆိုပြီး မပြတ်တမ်း Report လုပ်ကြတယ်။
တစ်ချို့အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ဆရာဝန်ကြီး ကျလို့။ ဒီနေ့ အီးမပါဖြစ်ဘူး၊ ရှူရှူးတွေဝါတယ်၊ ခေါင်းတွေကိုက်တယ်၊ လည်ချောင်းထဲကပူတယ်၊ ဖင်ခေါင်းထဲကအေးတယ် နဲ့ လာလာပြောကြပြန်ရော။ တစ်ချို့လည်း တီးတိုးဖေါ် အဖြစ်မြင်ပြီး၊ ဒီနေ့ Moody ဖြစ်တယ်၊ ဒင်းတော့လား အစိမ်းလိုက်ကိုဝါးစားချင်တယ်၊ ဒီဘဝ သေတာအေးပါတယ်၊ ပျော်လွန်းလို့ဂျွမ်းတောင်ထိုးနေရတယ် ဆိုတာမျိုးတွေ လာလာပြောကြပြန်ပါရောလား။
တစ်ချို့တွေများကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို အမှိုက်ပုံကြီး လို ဖွထားတတ်ကြပြန်ရော။ ဘာမှန်းခွဲမရတဲ့ပုံတွေတင်၊ ဝါးတားတားပုံလည်းတင်၊ ခွေးပုံတင်၊ ကြောင်ပုံတင်၊ အရက်ပုလင်းပုံတင်၊ အကောင့်ပိုင်ရှင်က ဘယ်သူလည်းဆိုတာ မှန်းမရလောက်အောင်၊ တစ်ပြုံတစ်မကြီး အုပ်သင်းဖွဲ့တဲ့ပုံတွေချည်းရွေးတင်၊ ဝင်ကြည့်မိပလားဆို မူးနောက်နေအောင်ကို လုပ်ထားတတ်ကြတာကလား။ တစ်ချို့ တစ်ချို့တွေတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို Chat Room လုပ်ဖို့သုံးကြပြန်တယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံအောက်မှာ ကွန်မင့်ပေးရင်းနဲ့ စကားလက်ဆုံတွေကျနေတတ်ကြတာမျိုး ကြုံဖူးမှာပေါ့။ ဟေ့ကောင်ကြီး မတွေ့တာကြာပေါ့ တို့။ ဟိုကောင်တွေနဲ့ရောတွေ့သေးလား တို့။ မင်းကတော့အရင်အတိုင်းပဲဟ၊ ခုဘယ်နိုင်ငံရောက်နေတုန်း တို့..၊ အဲဒီကနေစလိုက်ကြတာ ကွန်မင့်တွေအများကြီးဖြစ်ကုန်ရော..။
ဓါတ်ပုံရှင်ခမျာ ကွန်မင့်များလို့ မပျော်နိုင်ပါဘူး၊ မင့်ထားတာတွေက ပုံနဲ့မဆိုင်ဘဲကိုး။ သူတို့ဖာသာ စကားလက်ဆုံလာကျနေကြတာမှုတ်လား။ ဖေ့စ်ဘုတ်ကို ကာစီနိုတစ်ခု လို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုတစ်ခု လို သဘောထားတတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိလေရဲ့။ တက်တက်ပြီး ဂိမ်းကစားကြတာကလွဲလို့ ဘာဆို ဘာမှ မလုပ်ကြဘူးတဲ့လေ။ အဲလိုကျတော့ အက်ပြီးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက သောက်ရူးလား လို့ မေးရတော့မယ်။ (ဟိ..ဟိ.. ဒါက ရန်တိုက်ပေးတာ)။ ဆင်းရဲသား ဖေ့စ်ဘုတ်တန်းစား ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ ဆင်းရဲတော့ အကောင့် တစ်ခုကို လင်နှင့်မယား မျှပြီးသုံးကြရရှာတယ်လေ။
တစ်ယောက်တစ်ခုမရှိနိုင်ကြရှာတော့ ဒီလိုပဲ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်ပေါ့..။ တစ်ချို့ကျတော့ ဖေ့စ်ဘုတ်သူရင်းငှားချ တာလည်းရှိတယ်။ လယ်ပိုင်ရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်လယ်မလုပ်ဘူး၊ သူရင်းငှားကို သီးစားပေးပြီး လယ်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးပေါ့။ ကိုယ့်အကောင့်ကို ကိုယ်ကမဝင်ဖြစ်ဘူး၊ တစ်ခြားတစ်ယောက်က ဝင်ဝင်ပြီး activities တွေလုပ် လုပ်ပေးရတာမျိုးပေါ့..။ အများအားဖြင့်တော့ ကောင်လေးတွေက ပိုင်ရှင်၊ ကောင်မလေးတွေက သူရင်းငှားလုပ်တတ်ကြတာပေါ့..။ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်ကိစ္စနဲ့ကိုယ်များနေကြတဲ့ လူမှုနယ်ပယ်ထဲက မိတ်ဆွေတွေနဲ့ Keep in touch ဖြစ်နေဖို့တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က အများကြီး စွမ်းဆောင်ပေးနေတာအမှန်ပါပဲ။ သဟာဖြင့် သြဘာတို့ သူများတွေလုပ်သမျှကို ဘေးထိုင်ပြီး ဘုပြောနေသလားလို့ မေးကြတော့မယ်။
ကျုပ်မှာလည်း ကိုယ့်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်ပါနော်။ ကျုပ်အတွက်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်က ပြတိုက်တစ်ခု။ အပေါ်မှာပြောခဲ့တာမျိုး ကိုယ်ပိုင်ပြတိုက်တော့ဟုတ်ဘူးဗျ
။ အများကြည့်စေချင်လို့ လုပ်ထားတဲ့ပြတိုက်။ ပြတိုက်လေးလူစည်အောင်၊ နုတ်စ်တွေရေးရ၊ ပုံတွေ အော်ဂနိုက်ဇ်ဖြစ်အောင်တင်ရ၊ လူပျိုကြီးပြတိုက်မို့ လူအထင်မသေးအောင် ပြုပြင်နေရတာအမော။ ခုတော့ ဘုရားပေါ်က အလကားဝင်ရတဲ့ ဂေါပကပြတိုက်လောက်တော့ လူစည်ပါတယ်။ ဒါပေသည့် တစ်နေ့တစ်နေ့ ကျုပ်ပြတိုက် လူဘယ်လောက်လာလည်းရေတွက်ရတာ လောဘ။ ဘယ်သူတွေများ ဘယ်လိုမင့်သွားကြလည်း စောင့်ဖတ်ရတာလည်း မောဟ။ မတော်တရော် လာမင့်သွားလို့ မသိမသာ ပြန်တွယ်ရတာက ဒေါသ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့တွေးမိသား၊ နိမ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းလေးများ မျက်စပြစ်စတင်မယ်ကြံရင် ပထမဆုံးဖြတ်ရမှာ ဖေ့စ်ဘုတ်ပါလားလို့….။ သွပ်..သွပ်...သွပ်...
ရေတဲ့သူက thwin naung Soe
From: F.W mail
Posted by မိုးယံ at 10:22 PM9comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
﻿ မြန်မာနိုင်ငံမှ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများအား တရုတ်နိုင်ငံမှ အဓိက၀ယ် ယူနေ
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ၁၆ မိုင်စုပေါင်း စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွင် ဇန်န၀ါရီလ ၁၄ရက်နေ့က မြွေသေတ္တာများ တင်ဆောင်လာသော ကားနှစ်စီးကို ဖမ်းဆီးရမိစဉ် ကားပေါ်ပါလာသော မြွေသေတ္တာများ
မြန်မာနိုင်ငံမှ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများအား တရုတ်နိုင်ငံမှ အဓိက၀ယ်ယူနေပြီး အချို့နယ်ဒေသများ၌ ဒေသခံများ လိုအပ်သော အခြေခံ စားသောက်ကုန်များကို ကြိုတင်ပေးအပ်ကာ မှာကြားမှုများလည်း ရှိလာကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုး ကွဲစုံလင်သောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အချို့သော မျိုးစိတ်တို့မှာ မျိုးသုဉ်းပျောက်ကွယ်လု အနေအထားများကို ရင်ဆိုင်လာရကာ ယင်းမှာ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် အလွန်အကျွံဖမ်းဆီး ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု သိရှိရသည်။
“ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နေရာတွေ က ကျေးရွာတချို့မှာ ဒေသခံတွေက စားသောက်ကုန် အခက်အခဲရှိတော့ တရုတ်ဘက်က အဲဒါမျိုးတွေ ကြိုပေးထားကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လိုချင်တဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းတွေ ကိုမှာတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးညွန့်က ပြောကြားသည်။
ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ နေရာတွေက ကျေးရွာတချို့မှာ ဒေသခံတွေက စားသောက်ကုန် အခက်အခဲရှိတော့ တရုတ်ဘက်က အဲဒါမျိုးတွေ ကြိုပေးထားကြတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့လိုချင်တဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းတွေကို မှာတယ် . . .
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ရှားပါးလာသော မျိုးစိတ်များတွင် မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အခြေအနေရှိ အပင်နှင့်သတ္တ၀ါ ၃၉ မျိုး၊ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် ကြုံတွေ့နေ ရသော အပင်နှင့်သတ္တ၀ါ ၅၁ မျိုး၊ မျိုးသုဉ်းမှုအန္တရာယ်နှင့် ကြုံရမည့် အဆင့်သို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သော အပင်နှင့် သတ္တ၀ါမျိုးစိတ် ၁၁၅ တို့ ပါဝင်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံမှ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်များနှင့် တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများကို အဓိက ၀ယ်ယူနေသည့် နိုင်ငံများမှာ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်အနေဖြင့် ၀ယ်ယူမှုများကာ တရုတ်နိုင်ငံမှာမူ ဆေးဝါးဖော်စပ်ရန်အတွက် ၀ယ်ယူခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
“ဒေသခံတွေဟာ နေ့စဉ်ရှင်သန်မှုအတွက် တခြားနည်းလမ်း တွေမရှိတော့ တောင်ယာခုတ်တာ၊ အမဲလိုက်တာ၊ ရွှေတူးတာတွေ လုပ် ကြတယ်။ မရှိလို့လုပ်ကြတာ။ တချို့ အိမ်တွေမှာဆို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက်တွေ အများကြီးစုထားတယ်။ ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ တရုတ်တွေ လာဝယ်တယ်လို့ ပြောပြ ကြတယ်။ ဒီကနေ ၀င်ငွေရတာ။ ဆားနဲ့လဲရတာ လည်းရှိတယ်။ သမင်တစ်ကောင်မှ ဆားတစ်ပိဿာလောက် ရတာ။ သူတို့အတွက် alternative livelihood ဖန်တီးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်”ဟု ခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
မျိုးသုဉ်းမည့် အန္တရာယ်နှင့် ကြုံ တွေ့နေရသော တိရစ္ဆာန်များတွင် ဆင်၊ ကျား၊ အင်းကျား၊ ၀က်ဝံ၊ လိပ်မျိုးစိတ်များ၊ ငှက်မျိုးစိတ်များ၊ တောင်ဆိတ်၊ မျောက်လွှဲကျော် စသည့်မျိုးစိတ်များ ပါဝင်နေသည်။
“ဒေသမှာက ၀င်ငွေအနေနဲ့ တ ခြားလည်းမရှိဘူး။ အစားအသောက် ကလည်း ရှားတယ်။ ဒီတော့ ဟို ဘက်ကလည်းလိုအပ်တာတွေ ကြို တင်ပေးပြီး လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေမှာ တာပါ”ဟု ဦးစိုးညွန့်က ဆိုပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်ဒေသ အ၀င်အထွက်ဂိတ်များတွင် တစ်ဖက် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများသို့ ရောင်းချမည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းများကို ဖမ်းဆီးရမိခြင်းများလည်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်ဖက်နိုင်ငံအထိ ပို့ဆောင် ရောင်းချမှုများလည်း ရှိနေဆဲဖြစ် သည်ဟု သိရှိရသည်။
Posted by Unknown at 8:33 PM 1 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
ဆောရီးပဲ ညီမလေး .
ဆောရီးပဲ ညီမလေး ...
မင်းမောင်လေး ညီမလေးတွေ ကျောင်းစားရိတ်လိုနေတာ
မင်းကိုယ်တိုင်အတွက် ရောင်းပန်းလှဖို့၊ ဈေးကွက်ဝင်ဖို့
ပါတိတ်၊ သရီးစတပ်၊ မီနီစကပ်၊ နှုတ်ခမ်းနီ ပါးနီ၊ အော်ဒီကလုံး
မင်းတို့က မပဋာဆိုရင် ကိုယ်လည်းပဲ မောင်ဒါသပါကွယ်။
ဆောရီးပဲ ညီမလေးရေ ...
မင်းရဲ့ ဘုရားပေး လယ်တပွဲ
နွေစပါး၊ မိုးစပါးနဲ့ သီးထပ်သီးညှပ်
ဟိုကောင်တွေဆီမှာတော့ အာသာငမ်းငမ်း အကြည့်တွေ
ဒါကိုတော့ မင်းလည်းသိတယ်၊ ကိုယ်လည်းအသိပဲ။
မင်းဟာ နှုတ်မစောင့်သော လိပ်မလေး ဆိုပါတော့
မဲမှောင်နေတဲ့ မင်းရဲ့ မနက်ဖြန်လေးတွေကို
အရှက်သိက္ခာ တရွေးသားမျှမရှိရှာတဲ့ လူ့ငနွားတွေ
ရေနစ်နေတဲ့ ကောက်ရိုးလေး မင်းကို
နိုကီရာ၊ ဆိုနီအဲရစ်ဆင်၊ ပင်နာဆိုးနစ်တို့နဲ့
(ဟေ့ ... ဟေး.... ဟောဒီမှာ မြန်မာဟေ့ ...)
အဲဒီလို မစားရ ဝခမန်း ကြွေးကြော်
လျှပ်ပေါ်လော်လီခဲ့တဲ့ သူတို့စာရိတ္ထတွေကို ထုတ်ကြွားကြတယ်။
ကိုယ့်အိမ်တောင် ကိုယ်မပြန်နိုင်သေးတဲ့ ကိုယ့်ဘဝအတွက်ရောပေါ့။
အရင်အချိန်တွေတုန်းက ကိုယ်တို့ပြောခဲ့တယ် (တဘက်နိုင်ငံတွေကိုပေါ့)
( .. ) နိုင်ငံ ဆိုပြီးတော့လေ ...။
ခုများ ကြည့်စမ်း ... မင်းတို့လေးတွေလေ ...
မဲဆောက်မှာ၊ မယ်ဆိုင်မှာ၊ ဘီကေကေမှာ၊ ကြယ်ဂေါင်ရွှေလီမှာ
သတင်းတွေမှာ ဖတ်ရ၊ သတင်းတွေမှာ ကြားရတော့
မင်းတို့ကို ဘိုင်စကုပ်ထဲ ထည့်သေးတာပဲ ...
အင်း ... ... ... ... ... ...
ဖဦးထုပ်တွေ၊ နငယ်တွေ၊ ဘကုန်းတွေ
ဟေ့ ... အဲဒါ ဘီရုမာ ဟေ့ ...။ ဘီရုမာ ချယ်နယ်ဟေ့ ...။
တောက်! ဘယ်လောက် အသည်းနာဖို့ကောင်းလဲ
မိုးကျရွှေကိုယ်၊ တိုလီမိုလီ၊ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ ပေါသွပ်၊
ဒီကောင်တွေကို ဘယ်သူတွေက လင်ခ့်ပေးလိုက်တာလဲ
(ဟေ့ ... ဘီရုမာ ဘယ်ဈေးလဲ) အဲဒီလိုများ အမေးခံရရင်လေ
မင်း အထင်ကြီးတဲ့ ကိုကိုတွေလည်း
ဗမာကားဟေ့ ... ဆိုတာနဲ့
ဘာကိုမှ မလုပ်ချင် မကိုင်ချင်
ဇာတိပုညဂုဏ်မာနဟေ့ ... ဆိုပြီး
နှုတ်ခမ်းတလန် ပန်းတလန် လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုး
သူတို့ကရော ဘယ်လောက်များ သန့်စင်ကြလို့တုန်း
ဟေ့ ဒီမှာ ... ကိုယ်ပြောမယ် ညီမလေး
ဈေးကွက်ဝယ်လိုအားကြောင့် ရောင်းကုန်ဆိုတာ ရှိနေတာ
သူတို့တွေ လောကအလှကို ဖျက်ဆီးနေတာ
သူတို့မို့ အရှက်မရှိ (ဘယ်ရှိပါ့မလဲ)
ဟိုတယ်တွေမှာ ကလပ်တွေမှာ နောက်ဆုံး ဖိုရမ်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ
မင်းရဲ့ လက်ကလေးတွေကို ပုခက်မလွှဲခင်
မာဆတ်က ကိုယ်ရွှေကိုယ်မျိူးတွေကို ပျော်တော်ဆက်ချေဦး
ရွှေအိုရောင်ညနေခင်းတွေမှာ မင်းဘဝကို ရောင်းဈေးတင်ပေါ့
တခါသုံးဆပ်ပြာ၊ ငွေခြည်ရောင် ရေခဲသေတ္တာ
ညလယ်စာ မှာစားရင်း ဖြတ်ကျော်ဦးပေါ့။
အထည်ချုပ်တွေ ပိတ်တာ ...
ငွေနှစ်သောင်းအတွက် တိုက်ပွဲဝင်တာ ...
အရပ်ထဲမယ် ကိုယ်လေး ခေါင်းလေးတောင် လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ် မလှုပ်ဝံ့တာ ...
မင်းအပြစ်တွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး ညီမလေးရယ်။
မင်းတို့လည်း မင်းတို့ နိုင်တဲ့ဝန် ထမ်းနေရတာ
အချိန်တန်ရင်တော့ သိုးမည်းအုပ်ကြီးထဲက ပြန်ထွက်ခဲ့ပါ ညီမလေးတို့ရယ်။
မင်းတို့ ကိုယ်စီ ဒုလ္လဘတခုစီရှိတယ်
မင်းတို့ဟာ ငှက်ကလေးတွေပေမယ့် မင်းတို့မှာ ဝမ်းရေးရှိတယ်
မင်းတို့မှာ ဘဝသစ်တွေ ရှိနေမယ်
နောက်ပြီးတော့ မင်းတို့ဟာ ...
ဆောရီးပါ ညီမလေးရယ် ...
တခုထဲပါပဲ ညီမလေးတို့ရယ် ...။
ကိုယ့်မျက်နှာ မင်းတို့မမြင်အောင် ငုံ့
ဘယ်သူမှ မကြားအောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဆောရီးပါ ညီမလေးတို့ရေ ...။ ။
၁၄၊ မတ်၊ ၂၀၁၀။
(မြန်မာလူမျိုးမှန်ရင် မြန်မာအမျိုးသမီးများကို တန်ဖိုးထားကြပါ။ မြန်မာအမျိုးသမီးများလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကောင်းမွန်သင့်လျော်တဲ့တန်ဖိုးကို ထိန်းသိမ်းကြပါ)။
Posted by မိုးယံ at 10:53 PM 15 comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
Labels: ကဗျာ, ရင်သို့ထိသော
အပါယ်လေးပါးဆိုတာက ငရဲ၊တိရိစ္ဆာန်၊ပြိတ္တာ၊ အသုရကာယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အပါယ်ဆိုတာက(အပါယ) ဆိုတဲ့ပါဠိပုဒ်ကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ (အပါယ)မှာ (အပ+အယ)ဆိုပြီးနှစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်။ အပ=ကင်းခြင်း၊ အယ=ကုသိုလ်တရား၊ နှစ်ပုဒ်ပေါင်းလိုက်တော့ ကုသိုလ်တို့မှကင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ဆိုလိုတာက အပါယ်လေးဘုံးသားတို့မှာ ကုသိုလ်တွေမှကင်းခြင်း၊ ကုသိုလ်တရားတို့ကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်း မရှိခြင်း ချမ်းသာခြင်းတရားတို့မှကင်းခြင်း လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ မှန်ပါတယ်။အပါယ်လေးဘုံကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် ကုသိုလ်တရားတွေကိုပြုလုပ်နိုင်စွမ်း မရှိသည့်အတွက် ကောင်းသောဘုံဌာနကို ပြန်ရောက်ဖို့အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်။
အကုသိုလ်ကံ အဟုန်တွေကုန်ဆုံးမှသာ ကောင်းရာဘုံကိုရောက်စေတာပါ။ ငရဲဘုံဆိုရင်လည်း ငရဲသူ၊ ငရဲသားတို့ရဲ့ ဆင်းရဲဒုက္ခအလွန်ကြီးပါတယ်။ သံရည်ပူများနှင့်လောင်းခံရခြင်း ၊ခွေးနက်ကြီးများရဲ့
ကိုက်ခဲခြင်းကို ခံရခြင်း၊ ဓါး၊ လှံတို့ဖြင့်ထိုးခံရခြင်း စသည်ဖြင့် ဒုက္ခများစွာဖြစ်နေတဲ့နေရာ၊ ချမ်းသာဆိုလို့ မြူမှုန်တစ်မှုန်မျှမရှိလို့ ငရဲလို့ခေါ်တာပါ။ဒုက္ခများစွာဖြစ်တည် ခံစားနေရတဲ့နေရာ၊ချမ်းသာကင်းတဲ့နေရာကို ငရဲလို့ခေါ်ပါတယ်။အိပ်ခြင်း၊ စားခြင်း၊ ကာမဂုဏ်မှီဝဲခြင်းမှလွဲပြီး ကုသိုလ်ကံကိုမသိ၊ ကုသိုလ်ကံရဲ့ ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုမသိ၊ အကုသိုလ်ကံကိုမသိ၊ အကုသိုလ်ကံရဲ့ဆိုးကျိုးကိုမသိ၊ ဘုရား၊တရားသံဃာ၊ မိဘ၊ဆရာဆိုတာမသိ၊ နှမသားချင်းမှန်းမသိပဲ မဂ်တရား ဖိုလ်တရားတို့မှဖီလာကန့်လန့်သွားတတ်ခြင်း ကိုတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တာပါ၊ တိရိစ္ဆာန်ဘဝကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ၊ မိဘ နှမသားချင်းကိုတောင် မိဘနှမသားချင်းမှန်း မသိသည့်အတွက် မှားယွင်းစွာဖောက်ပြန်မှုတွေ ရှိပါတယ်။ ကုသိုလ်ကို ကုသိုလ်ပါလို့ နားမလည်ပါဘူး။ အကုသိုလ်ဆိုတာကိုလည်း အကုသိုလ်လုိ့မသိရတဲ့ဘဝပါ။ဒါဖြင့် ယခုခေတ်အနေထားနဲ့ အကုသိုလ်အလုပ်ကို အကုသိုလ်အလုပ်လို့ မသိတဲ့သူများ အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။ သတ္တဝါတစ်ကောင်ကို လည်ပင်းဖြတ်လို့ အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူး ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်။ သတ်တဲ့သူမခံရဘူး၊ ဖြတ်တဲ့ဓါးပဲခံရတယ်ဆိုရင် အဲလိုပုဂ္ဂိုလ်ဟာ ဘယ်လိုအနေထားကို ရောက်သွားပြီဆိုတာသိသာပါတယ်။ ဒါကတိရိစ္ဆာန်ပါ။
ပြိတ္တာဆိုတာက ပေတဆိုတဲ့ပါဠိကနေ ဆင်းသက်လာတာပါ။ ချမ်းသာခြင်းတရားအပေါင်းတို့မှ ဝေးကွာသောသတ္တဝါ၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ် အတ္တဘောမှ ကင်းကွာသွားတဲ့အတွက်ကြောင့် ပေတ(ပြိတ္တာ)လို့ခေါ်ကာ ဒီပေတအရ ပြိတ္တာဘုံကို ရောက်သွားသူတို့ကို ဆိုကြောင်း စာပေများက ဖွင့်ဆိုပြပါတယ်။
စာပေအဖွင့်တွေအရ ပြိတ္တာဆိုတာ တောခြုံပိပ္ပေါင်း တောင်စောင်းဂူလှိုဏ် စတဲ့အရပ်တွေမှာ မှီခိုပြီး ဆင်းရဲထူပြောစွာ ခံစားနေရတဲ့ သတ္တဝါတစ်မျိုးကိုဆိုကြောင်း မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ လူ့ပြည်လောကမှာ လူဖြစ်စဉ်က ငြူစူဝန်တိုခြင်း များပြားပြီး ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းမရှိ၊ သူတပါး ပေးကမ်းလှူဒါန်းတာကိုလည်း တားမြစ်ကာ ကုသိုလ် မလုပ်ဖြစ်အောင် အန္တရာယ်ပြုခဲ့ကြတဲ့ သူတွေဟာ များသောအားဖြင့် ပြိတ္တာဘဝမှာ အဖြစ်များကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပြိတ္တာဘဝကို ရောက်ရှိသွားကြတဲ့ သတ္တဝါတွေဟာ မိမိတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုကံကြောင့် အစာရေစာ ငတ်မွတ်ခြင်း ဒုက္ခကို ခံစားကာ နှစ်ပေါင်းရာထောင်း သိန်းသန်းမက ခံစားကြရသလို ဘုရားတစ်ဆူနဲ့ တစ်ဆူကြားကာလအထိ မကျွတ်မလွတ်နိုင်ဘဲ ရှိနေတတ်ကြတဲ့ ပြိတ္တာများလည်း အများအပြား ရှိကြောင်းဆိုပါတယ်။ အဲဒီလို အချိန်ကာလ ကြာမြင့်စွာ အစာရေစာ မစားမသောက်ရဘဲ ဆင်းရဲဒုက္ခကို ခံစားကြရပေမယ့် အကုသိုလ်ကံ အရှိန်မကုန်သေးတဲ့အတွက် ကွယ်လွန်သေဆုံး၊ ဘဝတုံးခြင်း မရှိသေးဘဲ အသားအသွေးမရှိ အရေအကြော အရိုးမျှသာရှိကာ အလွန်ဆိုးဝါးတဲ့ အဆင်းနဲ့ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ တည်ရှိနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပြိတ္တာတစ်ဦးရဲ့ အဆင်းဆိုးဝါးပုံကို ပေတဝတ္ထုမှာ ဖွင့်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအဖွင့်အရ “ပြိတ္တာတစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်ပမာဏဟာ ထန်းပင်လုံးပမာဏရှိပြီး ကိုယ်အရေဟာလည်း အလွန်ကြမ်းတမ်းကြောင်း၊ ဖောက်ပြန်တဲ့ဆံအမွေးရှိပြီး ကြောက်မက်ဖွယ်အဆင်းရှိကာ အလွန်ဖောက်ပြန် ဆိုးဝါးလျက် စက်ဆုတ်ရွံရှာဖွယ် အမြင်ရှိကြောင်း၊ ထိုပြိတ္တာသည် ငါးဆယ့်ငါးနှစ်လုံးလုံး ထမင်းတစ်လုံး ရေတစ်ပေါက်ကိုမျှ မရရှိဘဲ ခြောက်ကပ်သော လည်ချောင်းနှုတ်ခမ်းရှိလျက် ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း နှိပ်စက်ကာ ဟိုဟိုဒီဒီ ပြေးလွှားနေရတတ်ကြောင်း” စသဖြင့် သိရပါတယ်။ ဒါက ဒီဝတ္ထုမှာပါတဲ့ ပြိတ္တာအကြောင်း ဖွင့်ဆိုချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိတ္တာအမျိုးအစား များသလောက် ခံစားရပုံချင်းလည်း မတူညီလှပါဘူး။
သင်္ဂါယနာတင် အဋ္ဌကထာ ဋီကာကျမ်းအဖွင့်များအရ ယေဘုယျအားဖြင့် ပြိတ္တာအမျိုးအစား လေးမျိုးရှိကြောင်းလည်း မှတ်သားရပါတယ်။ အဲဒီလေးမျိုးက.........
၁။ သူတပါးတို့ ပေးအပ်တဲ့ အစားအစာကို အမှီပြုပြီး အသက်ရှင်ရသော ပရဒတ္တူပဇီဝိကပြိတ္တာ
၂။ ထမင်းငတ်ခြင်း၊ ရေမွတ်သိပ်ခြင်းတို့ မပြတ်နှိပ်စက်ခံနေရတဲ့ ခုပ္ပိပါသိကပြိတ္တာ
၃။ အမြဲအကြွင်းမဲ့ လောင်ကျွမ်းခံနေရတဲ့အတွက် ပူပန်ခြင်းရှိနေရသော နိဇ္ဈာမတဏှိကပြိတ္တာ
၄။ အသုရကာယ်လို့ သီးသန့်ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ အသုရာကာယခေါ် ကာလကဉ္စိကပြိတ္တာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပြိတ္တာလေးမျိုးမှာ နံပါတ်တစ်အမျိုးအစား ပြိတ္တာကတော့ လူ့ဘဝက ဆွေမျိုးဉာတကာ စသူတွေရဲ့ ရည်စူးပြီး လှူဒါန်းပေးတဲ့ အလှူကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်ပါက စားဖွယ်သောက်ဖွယ်များကို ရရှိခံစားနိုင်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ဒါကပြတ္တာပါ။
အသုရကာယ်ဆိုတာကတော့ နတ်တွေလို ရဲရင့်ခြင်း၊တောက်ပခြင်း၊တင့်တယ်ခြင်းကင်းနေတဲ့သတ္တဝါ၊မှင်စာ နတ်သေးနတ်ငယ်၊ နတ်စုတ်၊နတ်ပြတ် နတ်မွှားလေးတွေကိုခေါ်တာပါ။(မရယ်လိုက်နဲ့နော်)။ ဒါကအပါယ်လေးဘုံပါ။ အဲဒီအပါယ်လေးဘုံကို ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် အတော်ကြောက်စရာ ကောင်းပါတယ်။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခွင့်မရသလို ချမ်းသာခြင်းလည်းကင်းပါတယ်။လူဘုံ လူလောကမှာကြုံဆုံနေရတဲ့ ဒုက္ခများပင် အင်မတန်မှကြောက်စရာ ကောင်းတယ်ဆိုရင် အပါယ်လေးဘုံသားများ ကြုံဆုံနေရတဲ့ ဘေးဒုက္ခများဟာ လူ့လောက…က ဒုက္ခများထက် အဆပေါင်းမြောက်များစွာ သာလွန်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အပါယ်လေးဘုံရောက်သွားရင်လည်း ကောင်းသောဘုံဌာနသို့ ပြန်ရောက်ဖို့သာမလွယ်သောကြောင့် ထိုအပါယ်လေးဘုံမှ အပြီးပိုင်ကင်းလွတ်အောင် ဒါန သီလ အစထားပြီး ဝိပဿနာတရားများကို ကြိုးစားအားထုတ်သင့်တယ်ဆိုတာ ပြောပြချင်တာပါ။ ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ် အဆင့်ရောက်သွားမယ်ဆိုရင် အပြီးပိုင် အပါယ်လေးပါးက ကင်းလွတ်ပါတယ်။ ဒီဘဝမှာ တပည့်တော်တို့ ဝိပဿနာတော့ကြိုးစား အားထုတ်ပါမယ်။ ဒါပေမယ့် သောတာပန်တည်၊ မတည်ဆိုတာတော့အာမခံလို့မရပါ။ သောတာပန်မတည်ရင်ရော အပါယ်လေးပါးက မလွတ်တော့ဘူးလား။ ဒီဘဝကနေပြီးတော့ အပါယ်လေးပါးလွတ်မြောက်ချင်ရင် ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမလဲ။ ဘယ်လိုကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရင် အပါယ်လေးပါးလွတ်ကင်းမလဲ။ စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ မေးဖွယ်ရာရှိပါတယ်။အဲဒီတော့ နောက်ဘဝ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ချင်ရင် အပါယ်လေးပါးရောက်ကြောင်း(တနည်း)အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်တွေရှိနေပါတယ်။
အဲဒီကုသိုလ်တွေက ခုနစ်မျိုးရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကဘာတွေလဲလို့ဆိုတော့
(၁)။ဘုရား၊တရား၊သံဃာတော်များရဲ့ ဂုဏ်များကို မိရိုးဖလာဗုဒ္ဓဘာသာ လိုမကိုးကွယ် မဆည်းကပ်ပဲ တကယ့်စစ်မှန်သော ခိုင်မြဲသော သဒ္ဓါ၊ ပညာဦးစီးတဲ့စိတ်ထားနဲ့ ကြည်ညိုခြင်းလို့ဆိုတဲ့ (သရဏဂုံကုသိုလ်)။ အဲဒီကုသိုလ်မျိုးရှိထားရင် အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ပါတယ်။(သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးက လွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
(၂)။ငါးပါးသီလမြဲခြင်း(ပဉ္စသီလကုသိုလ်)။ ငါးပါးသီလမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်း အပါယ်လေးပါးကလွတ်
မြောက်ပါတယ်။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးကလွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
(၃)။စာရေးတံ မဲချခြင်းကုသိုလ်၊ ဆိုလိုတာက ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာများ သီတင်းကျွတ်ကာလမှာ ဆိုရင် ကျောင်းတိုက်များမှ သံဃာများကို မဲချပြီး ကျတဲ့ သံဃာတော်ကို ဆွမ်းစတဲ့လှူဘွယ်ပစ္စည်းများကို ပေးလှူတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပါ။ကထိန်ရာသီမှာဆိုရင် ပဒေသာပင်များ လှူဒါန်းတဲ့ကုသိုလ်ပါ။ မိမိလှူလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းဝတ္ထုများကို မဲပေါက်တဲ့ ကျောင်းတိုက်က သံဃာတော်များကို ကပ်လှူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မိမိလှူလိုက်ပြီဆိုတည်းက ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲ (ဆိုလိုတာက ငါနဲ့သိတဲ့ဦးဇင်းအတွက် ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ကျောင်းအတွက်) ဆိုပြီး ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမငဲ့ပဲ ကျရာသံဃာတော်တွေ ချမ်းချမ်းသာသာသုံးဆောင်မှီဝဲစေလို့တဲ့အတွက် သံဃာဂုဏ်ကိုရည်မှန်းပြီး လှူဒါန်းတဲ့အလှူမျိုးကိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။ ဒါကို စာရေးတံဆွမ်း
ဝတ်လို့ ခေါ်တာပါ။ အလွယ်မှတ်ချင်ရင် စာရေးတံမဲချတဲ့ကုသိုလ်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ အဲဒီကုသိုလ်ဟာ အင်မတန်မှပြုရလွယ်ပြီး အကုန်ကျနည်းပေမယ့် ရလိုက်တဲ့ အကျိုးတရားကတော့ အပါယ်လေးပါးကတောင် လွတ်မြောက်တယ်ဆိုတော့ အင်မတန်ကိုမှ အကျိုးကျေးဇူးများပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်များဟာ တကယ်ဘုန်းရှင်ကံရှင်များဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ပြုလုပ်ခွင့်ရတဲ့ ဒါနမျိုးပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ရတာ အင်မတန်ကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးကလွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
(၄)ပက္ခိယဘတ်လို့ခေါ်တဲ့ ကုသိုလ်ပါ။ ရှင်းအောင်ပြောမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ ကျောင်းတိုက်များကို တစ်လ ဆွမ်းတစ်ချိုင့်သော်လည်း၊ တစ်လဆွမ်းနှစ်ချိုင့်သော်လည်းကောင်း လှူတဲ့အလှူကို ခေါ်တာပါ။ လဆန်းပက္ခမှာလှူရင် လဆန်းပက္ခဆွမ်းပေါ့၊ လဆုတ်မှာလှူရင် လဆုတ်ပက္ခဆွမ်းလို့ခေါ်တာပါ။ အဲဒီလို တစ်လကိုနှစ်ကြိမ်သော်လည်းကောင်း၊တစ်ကြိမ်သော်လည်းကောင်းလှူတဲ့အလှူဒါနမျိုးကို (ပက္ခိယဘတ္တ) ကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်လေးက ငွေကုန်ကျေးကျလည်းနည်းပါတယ်။ ပင်ပန်းမှုလည်းမကြီးလေးပဲ ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်က အပါယ်လေးပါး လွတ်မြောက်တဲ့အထိအကျိုးကျေးဇူး များပါတယ်။ဒီကုသိုလ်ကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံး ပြုလုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုတာပါ။ (သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အပါယ်လေးပါးက လွန်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်လေးရှိထားရင် သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အဆင့်ချင်းတူပါတယ်။)
(၅)။ဝေဿဝါသိက ကုသိုလ်ပါ။ ဗမာလိုရှင်းရှင်းပြောရင် ဝါဆိုသင်္ကန်းကပ်လှူတဲ့ကုသိုလ်ပါ။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ဝါဆို ဝါကပ်တော်မူကြတဲ့ သံဃာတော်အရှင်မြတ်များကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဝါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူမယ်ဆိုရင်(မှတ်ချက် မိမိတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော် တစ်စုံတတ်နိုင်ရင်တစ်စုံ။ နှစ်စုံတတ်နိုင်ရင်နှစ်စုံပေါ့) အဲဒီကုသိုလ်ဟာလည်း ပြုလုပ်လိုက်တဲ့ကုသိုလ်လေးပါး သေးပေမယ့်ရလိုက်တဲ့အကျိုးက အပါယ်လေးပါးကတောင် လွတ်မြောက်ချင်းဆိုတဲ့ အကျိုးမျိုးကိုခံစားရတာပါ။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားသဏ္ဍန် တူတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သောတာပန် ပုဂ္ဂိုလ်ကအပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်သလို ဒီကုသိုလ်ကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလုပ်သွားမယ်ဆိုရင် စိတ်သာချပါ။အပါယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်ပါတယ်။
(၆)။ဧကောအာဝါသော ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ပါ။ ဆိုလိုတာက ကျောင်းတစ်ဆောင်သော်လည်းကောင်း၊ ဇရပ်တစ်စောင် သော်လည်းကောင်း လှူဒါန်းတဲ့အလှူဒါနကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းတစ်ဆောင်လုံး တပည့်တော်တို့မတတ်နိုင်ပါဘူးဘုရား။ ဆိုရင်တော့ တစ်ဆောင်လုံးမတတ်နိုင်ရင် တတ်နိုင်သလောက် လှူပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။အဓိက ကျောင်းဆောက်တဲ့ကုသိုလ်ထဲမှာ မိမိရဲ့ဒါနပါဖို့သာ အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီကုသိုလ်ဟာလည်း ကျန်တဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာကို မပြောလိုတော့ပါဘူး အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ခြင်းဆိုတဲ့ အဆင့်မြင့်တဲ့ အကျိုးကိုပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲလို ကျောင်းတစ်ဆောင်။ ဒါမှမဟုတ်တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလိုက်မယ်ဆိုရင် အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ပါတယ်။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလားတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကုသိုလ်ကိုလည်း တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းပါလို့ပြောပြ အသိပေးပါတယ်။
နောက်ဆုံး(၇)။ ဧကာပေါက္ခရဏီတဲ့ ဆိုလိုတာက ရေတွင်းရေကန်များကို တူးဖော်ခြင်း၊ လှူဒါန်းခြင်း၊ ရေတွင်းရေကန် အဟောင်းများကိုပြုပြင် လှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်မျိုးပါ။ အဲလောက်ထိ မလုပ်နိုင်သေးဘူးဘုရား ဆိုရင် မိမိအိမ်ရှေ့မှာသော်လည်းကောင်း လမ်းထောင့်တစ်နေရာရာမှာ သော်လည်းကောင်း ရေအိုးစင်လေးဆောက်ပြီး သောက်ရေအိုးလေး တည်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။အဲလောက်ထိမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင် အောက်ထစ်ဆုံး ရေသန့်ဗူးလေးကိုတည်ထားပြီး ခရီးသွား ရဟန်း၊ ရှင်၊လူများသောက်သုံးဖို့ တည်ထားမယ်ဆိုရင်လည်း အဲဒီဒါနဟာ ငွေကြေးနဲ့တိုင်းတာမယ်ဆိုရင် သေးပေမယ့် ရလိုက်တဲ့ အကျိုးက အပါယ်လေးပါးလွတ်မြောက်တဲ့အထိ တန်ဘိုးကြီး၊ အကျုိးများပါတယ်။ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အလားတူဖြစ်တာပါ။
ဒါဖြင့်ရင် အားလုံးသော ဒကာ ဒကာမများ ဆိုခဲ့ ပြီးတဲ့ ကုသိုလ်(၇)မျိုးထဲက တစ်မျိုးကိုသော်လည်း၊ နှစ်မျိုးကိုသော်လည်းကောင်း၊ (၇)မျိုးလုံးကိုသော်လည်း အမြဲတန်းဝတ်ထားပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုရင် မြတ်စွာဘုရားက သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အလားတူပါတယ်၊ သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်များ အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်သလို အဲဒီကုသိုလ်များကို အမြဲတန်းပြုလုပ်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ပါတယ်လို့ သေသေချာချာဟောထားခဲ့တာပါ။ တစ်ကြိမ်လောက်လုပ်ပြီး အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ချင်လို့တော့မရဘူးနော်၊ (နိဗဒ္ဓ)ဆိုတဲ့ပါဠိက ပါနေတော့ အမြဲတန်းဝတ်ထားပြီး ပြုလုပ်ရမယ်လို့ပြောတာပါ။ ဝါဆိုသင်္ကန်းဆိုလည်းနှစ်စဉ်၊ စာရေးတံမဲဆိုရင်လည်း နှစ်စဉ်၊ ဆွမ်းချိုင့်ဆိုရင်လည်း လစဉ်၊ ရေအိုးစင်ဆိုရင်လည်း နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပေါ့။ ရတနာသုံးပါးကိုလည်း အသက်ထက်ဆုံး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ရမယ်။ ငါးပါးသီလကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး စောင့်ထိန်းမယ်ဆိုရင် အပါယ်လေးပါးက လွတ်မြောက်ပါတယ်လို့ တိုက်တွန်း အသိပေးချင်တာပါ။ အားလုံးသော ဒကာ၊ ဒကာမ များ မိမိနှင့်ပတ်သတ်တဲ့ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေ အပေါင်းသင်းများကိုလည်း ဒီကုသိုလ်(၇)ချက်ကိုတစ်ဆင့်ပြောပြပေးပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိကိုယ်တိုင်လည်း တတ်နိုင်သလောက် တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးကိုဖြစ်စေ၊ (၇)မျိုးလုံးကိုဖြစ်စေဝတ်ထားပြီး အားထုတ်ပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
အားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ၊ သာသနာတော်အကျိုးကိုလည်း ဆောင်ရွတ်နိုင်တဲ့ သာသနာပြု အမျိုးကောင်းသား၊အမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။
Posted by မိုးယံ at 4:05 PM0comments Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
အမေရိကန် အရှေ့ဘက်ပိုင်းတွင် နှစ်တစ်ရာ အတွင်း မကြုံ...
Free virus software key (ကွန်ပျူတာ သုံးနေသော သူငယ...
တပ်သားသစ် စုဆောင်းရာတွင် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ လိုက...
အမေရိကန်စာရေးဆရာ မာ့ခ်တွိန်၏ နေအိမ်ပြတိုက်မှ ဒေါ်လာ...
အဖြူရောင်နတ်သမီး (နမ်းမ၀) ပတ်သက်သူများအတွက် အရေးပေ...
၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံပေါင်း ၃၁ နိုင်င...
တရုတ်နိုင်ငံမှ ဗုဒ္ဓမြတ်စွယ်တော်ကို မြန်မာနိုင်ငံသိ...
ဆရာမျိုးဟန်ကို - 2011, August လ အတွက် ဗေဒင် ဟောစတမ...
﻿ မြန်မာနိုင်ငံမှ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ထွက် ပစ္စည်းမျာ...
ဇနီး​နှင့်​ ​ဖောက်ပြန်သူအား​ သတ်ဖြတ်ပြီး​ လိင်အင်္ဂါ...
အိန္ဒိယမိန်း​​က​လေး​​တစ်ဦး​အား​ ဖခင်က မုဒိမ်း​​ကျင်...
File တွေကို ပိတ်မယ်